YEYINTNGE(ကနဒေါ): Sunday, January 13
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ပြည်ပခရီး ထွက်ခွာ
ဇန်န၀ါရီ၁၄ရက်မနက် ၇နာရီခွဲက ကိုမင်းကိုနိုင်အပါအ၀င် ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား ၁၆ဦးပါဝင်သောအဖွဲ့ သည်ပထမဆုံးပြည်ပခရီးစဉ်အဖြစ် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ရန်ကုန်လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။သတင်း -သီဟ၊ဓါတ်ပုံ -ထွဋ်မြတ်
ယနေ့(၁၄၊၁၊၂ဝ၁၃)နေ့နံနက်(၈း၃ဝ)တွင် မင်းကိုနိုင်ခေါင်းဆောင်သော ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသား(၁၆)ဦးသည် MAI လေယာဉ်ဖြင့် ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံသို့ ထွက်ခွာသွားကြသည်။ အဆိုပါခရီးစဉ်မှာ ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံအခြေစိုက်
Centrer Peace and Conflict Studies( ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ပဋိပက္ခများလေ့လာရေးစင်တာ CPCS )
၏အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ဒေါက်တာကျော်သူ၏ ပေါင်းကူးဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်နေ့မှ ဇန်နဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့အထိ
ကြာမြင့်မည့် အဆိုပါခရီးစဉ်တွင် ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးဆောင်ရွက်မှု
လေ့လာကြမည်ဖြစ်သည်။ ထိုခရီးစဉ်အတွင်း ဖိလစ်ပိုင်အစိုးရတာဝန်ရှိသူများ၊ ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း
BY YeYint Nge ... 1/13/20130comment
((( မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ထပ်မံစိမ်ခေါ်ခြင်း )))
၂၀၀၇-၀၈ လောက် မှာ ..
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ က ..
ဒုရဲအုပ် အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကို ..
အိမ်ဖေါ် အဖြစ် တာဝန်ပေး အသွင်ယူ စေပြီး ..
အချိန်ကြာကြာ အိမ်ဖေါ် အလုပ်လုပ်ရင်း ၊ စောင့်ပြီးမှ ..
ခက်ခက် ခဲခဲ ဖမ်းလိုက်ရတဲ့ ..
နာမည်ကြီး ရာဇ၀တ်သား တစ်ယောက်ဟာ ..
ရန်ကုန် မြို့ပေါ်မှာ ..
(၄င/၆၆၅၅) Hummer ကား အနက်ကြီး စီးပြီး ..
ကိုထင်ကျော် ကို ပေါ်တင်ကြီး ၀င်ရိုက် သွားပြီ ..
( ခါးပိုက်ထဲ ထည့်ချင်တဲ့ အမာဂိုဏ်း အဘ တစ်ယောက် အတွက် .. ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်လိုက်တာလား )
မင်းအောင်လှိုင်ပြည်ပကို Stay ရှောင်
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ စင်ကာပူနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ထွက်ခွာ
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် စင်ကာပူ သမ္မတ နိုင်ငံ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် Lt-Gen Neo Kian Hong ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ စင်ကာပူ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ သွားရောက်ရန် အတွက် ယနေ့ နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် လေဆိပ်မှ မြန်မာ့ တပ်မတော် အထူး လေယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့သို့ ထွက်ခွာကြရာ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်သန်းသန်းနွယ်၊ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လှဌေးဝင်းနှင့် ဇနီး ဒေါ်မာမာဝေ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ရေ) ဗိုလ်ချုပ် သူရ သက်ဆွေ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (လေ) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြတ်ဟိန်း၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ တပ်မတော် အရာရှိကြီး များနှင့် နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးတို့က နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
ဆက်လက်၍ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် များသည် ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ စင်ကာပူ သမ္မတ နိုင်ငံသို့ မြန်မာ့လေကြောင်း ခရီးစဉ်ဖြင့် ထွက်ခွာကြရာ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာန ချုပ် တိုင်းမှူးနှင့် တပ်မတော် အရာရှိ ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ စင်ကာပူ သမ္မတ နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr.Chua Hian Kong Robert၊ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာ နိုင်ငံတော် ဆိုင်ရာ မလေးရှား နိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Dr.Ahmad Faisal Bin Muhamad နှင့် တာဝန် ရှိသူများက ရန်ကုန် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့တွင် အဖွဲ့ဝင်များ အဖြစ် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ၏ဇနီး ဒေါ်ကြူကြူလှ၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း) မှ တပ်မတော် အရာရှိ ကြီးများနှင့် တာဝန် ရှိသူများ လိုက်ပါ သွားကြသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ဦးဆောင်သော မြန်မာ့ တပ်မတော် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် မလေးရှား နိုင်ငံ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် General Tan Sri Dato' Sri Zulkifeli Bin Mohd Zin ၏ ဖိတ်ကြားချက် အရ စင်ကာပူ သမ္မတ နိုင်ငံမှ တစ်ဆင့် မလေးရှား နိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ဆက်လက် သွားရောက်မည် ဖြစ်ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ချစ်ကြည်ရေး ခရီး ထွက်ခွာရာ ဒုတိယ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စိုးဝင်းနှင့် တာဝန် ရှိသူများက နေပြည်တော် လေဆိပ်တွင် ပို့ဆောင် နှုတ်ဆက် ကြစဉ်။
“ဒီတစ်ခါလည်း မုဒိန်းမှုပါပဲ” အပိုင်း(၃)
“ဒီတစ်ခါလည်း မုဒိန်းမှုပါပဲ” အပိုင်း(၃) by Wira Thu on Wednesday, November 28, 2012 at 6:11am ·
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂-ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၄)ရက်၊
အကြောင်းအရာ။ ။ အမှန်တရားပျောက်ကွယ်အောင် ဆောင်ရွက်နေသူများကို အရေးယူပေးရေး
၁။ ကျွန်မဇာခြည်စိုးမိုး (ခ)မဇာဇာအောင်သည် အခြေခံလူတန်းစား(ဆင်းရဲသား) မိကောင်းဖခင်သမီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ လူဆင်းရဲသော်လည်း စိတ်ဓာတ်နှင့်အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်ယွင်းမှုမရှိကြောင်း၊ မိမိကိုယ်တိုင်နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်းမှ သက်သေပြနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
၂။ ကျွန်မအား အလိုမတူဘဲ အဓမ္မပြုကျင့်သူ တရားခံအေးမြင့်သည် ၄င်း၏အကိုဖြစ်သူ ပြင်ဦးလွင်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ဒေသရုံးမှ ဝန်ထမ်းဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်မြင့်၏ ဂေါက်သီးအားကစား ကျွမ်းကျင်မှုကြောင့် ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးကဲများနှင့် ခင်မင်ရင်းနှီးမှုရှိခြင်း၊ ငွေကြေးချမ်းသာခြင်းများကို အခွင့်ကောင်းယူကာ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ဆိုင်ရာရဲ၊ တရားရေး၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းများ၏ အကူအညီကိုရယူ၍ အမှုမှ လွတ်ရာလွတ်ကြောင်း၊ နည်းလမ်းမျိုးစုံကို အသုံးပြု ကြိုးစားလျက် ရှိပါသည်။
၃။ ၄င်းတို့၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပေါ် မျက်ကွယ်ပြုဆောင်ရွက်နေသူများမှာ (၁၈-၅-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ပြင်ဦးလွင်မြို့ ရဲစခန်း၌ စတင်အမှုဖွင့်တိုင်ကြားသော်လည်း (၁၂-၇-၂၀၁၂) (နှစ်လနည်းပါးကြာ)မှသာ ရဲစခန်း၏ အရေးယူဆောင်ရွက်မှု စတင်ခဲ့ခြင်း၊ စတင်အမှုဖွင့်စဉ်က တရားခံအေးမြင့်နှင့် ၄င်း၏အစ်မ၊ ညီမများကို မုဒိန်းမှု၊ အိမ်ပေါ်တက်ရိုက်မှု (ပုဒ်မ-၃၇၆/၄၅၂/၂၉၄)တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သော်လည်း မုဒိန်းမှု(ပုဒ်မ-၃၇၆-)ကို သမီးရည်းစားမှု (ပုဒ်မ-၄၁၇-)အဖြစ် လည်းကောင်း၊ အိမ်ပေါ်တက်ရိုက်မှု(ပုဒ်မ-၄၅၂)ကို ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် အိမ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်မှု (ပုဒ်မ-၄၅၁)သို့လည်းကောင်း သက်ဆိုရာရဲ၊ တရားရေး၊ ရှေ့နေနှင့် ဥပဒေအကြံပေးတို့ ပူပေါင်း၍ ပုဒ်မများကို ပြောင်းလဲပစ်ခြင်း (၄င်းတို့သည် တရားခံအေးမြင့်နှင့် ဆွေမျိုးတော်စပ်နေသည့်ပမာ) တရားရေးဆိုင်ရာ စစ်ဆေးစီရင်မှု လုံးဝမပြုလုပ်ရသေးဘဲ တရားခံများကို အာမခံမရရအောင် ဥပဒေဘက်တော်သားများမှ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ တရားရုံးစစ်ဆေးကြားနာမှုများတွင် အစောပိုင်းကာလများ၌ တစ်ဖက်သက်စစ်ဆေးကြားနာခဲ့ခြင်း (ယခင်တိုင်စာများပို့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဗြောင်ကျကျ တစ်ဖက်သတ်စစ်ဆေးကြားနာမှုများ မရှိတော့ပါ။)စသည်တို့ ဖြစ်ပါသည်။
မကြာမီ တရားလိုသက်သေများကို စစ်ဆေးပြီးတော့မည် ဖြစ်ရာ ၄င်းတို့၏တရားဥပဒေနှင့် မညီညွှတ်စွာ ပုဒ်မများကို ဝိုင်းဝန်ပူးပေါင်းကြံစည်၍ ပြောင်းလဲထားကြောင်း ပေါ်လွင်လာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိ်ု့ကြောင့် ရုံးချိန်းများကိုလည်း အကျိုးအကြောင်းမညီညွတ်ဘဲ အချိန်ဆွဲဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ကို တွေ့မြင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ၄င်းတို့၏ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုကြီးကို ဖုံးကွယ်လို၍ ကျွန်မတို့ နစ်နာသူဘက်မှ အခကြေးငွေမယူဘဲ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဖြင့် အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပေးသူ တရားလိုရှေ့နေ ဦးဇော်ဝင်းကို ၄င်းတို့မှ အကွက်စဉ်၍ (ပုဒ်မ-၄၆၈/၄၁၇)ဖြင့် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားသည်အထိ ဥပဒေဘက်တော်သားများက တရားဥပဒေကို အလွဲသုံးစား လုပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မ၏ အမှုရုံးချိန်းမှာ (၁၅-၁၁-၂၀၁၂)ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းကို ယနေ့ (၁၄-၁၁-၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ဖမ်းဆီးသည်မှာ အလွန်ပင် တိုက်ဆိုင်လွန်းပြီး တရားရေးဆိုင်ရာ သမိုင်းတစ်လျှောက်တွင် အလွန်ပင်ဖြစ်တောင့် ဖြစ်ခဲ အခြေအနေပင်ဖြစ်ပါသည်။
တရားခံဘက်မှလည်း ကျွန်မတို့ မိသားစုအပေါ်တွင် လူမဆန်သည့်လုပ်ရပ်များကို အသိုင်းဝိုင်းအင်အား၊ ငွေအင်အားဖြင့် မတရားအနိုင်ကျင့်ဆောင်ရွက်မှုများစွာကို ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိပါသည်။ ကျွန်မတို့မိသားစုအား အကျင့်စာရိတ္တမကောင်းကြောင်း ၄င်းတို့မှ သတင်းလွှင့်ထားခြင်း၊ ကျွန်မတို့နှစ်ပေါင်းများ ခြံစောင့်အဖြစ် နေထိုင်လျက်ရှိသော ခြံဝင်းပိုင်ရှင်ကို သွေးထိုး၍ ခြံဝင်းအတွင်း ဆက်လက်မနေထိုင်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ မိသားစုဝင်ငွေ ရရှိရေးအတွက် ညီအစ်မနှစ်ဦး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် အလုပ်လျှောက်ထားမှုကိုလည်း ဖျက်လိုဖျက်ဆီး ပြုလုပ်ခြင်းများကို စာနာခြင်းကင်းမဲ့စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။
ကျွန်မအနေဖြင့် ယခုအခါ ဘက်ပေါင်းစုံမှ မတရားနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့်ခြင်းကို ခံနေရသည့်အပြင် ကျွန်မကဲ့သို့ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အခမဲ့ရှေ့နေလိုက်ပါ ဆောင်ရွက်ပေးနေသူ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းကိုပါ မတရားအကွက်ဆင် ဖမ်းဆီးမှု များဆောင်ရွက်လာပါသဖြင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အတားအဆီးဖြစ်အောင် ဆောင်ရွက်နေသူများကို စုံစမ်းစစ်ဆေး အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
အမှတ်(၁)၊ စန္ဒာလမ်း၊ ရ.က.က(၅)၊
“ဒီတစ်ခါလည်း မုဒိန်းမှုပါပဲ” အပိုင်း(၄)
by Wira Thu on Thursday, November 29, 2012 at 11:56am ·
ရက်စွဲ။ ။ ၂၀၁၂၊ အောက်တိုဘာလ၊ (၁၅)ရက်။
အကြောင်းအရာ။ ။ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေး အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးပါရန်။
နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်အား ဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာတစ်ဦးအဖြစ် ကောင်းစွာယုံကြည်ပါသည်။ အခြေခံလူတန်းစား (ဆင်းရဲသား)တို့၏ ဘဝကို အလုံးစုံမဟုတ်သော်မှ အစွမ်းရှိသ၍ ကာကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်သည်။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်းတွင် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီး၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို အထူးပင်လေးစားသည်။ ဘင်္ဂါလီမွတ်ဆလင် ကုလားအရေးတွင် တိုင်းရင်းသားတို့ဘက်မှ ပြတ်သားစွာ ရပ်တည်ပေးခဲ့ခြင်းကို ဦးဇင်းတို့ နှစ်လုံးသားတွင် အသိအမှတ်ပြုလာခဲ့ ပါသည်။
ဤသို့သော သိသာထင်ရှားစေသည့် ယုံကြည်ခြင်း၊ လေးစားခြင်း၊ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတို့ဖြင့် နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးအား အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာအတွက် တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်၍သော်လည်းကောင်း၊ မွတ်ဆလင်ကုလားဆိုး တစ်ကောင်၏ စော်ကားနှိပ်စက်အနိုင်ကျင့် ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းလှသော အဓမ္မပြုကျင့်ခံရမှုတစ်ခုကို အမှန်လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ ရောက်စေရန် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ရက်ကွက်ကြီး(၅)၊ စန္ဒာလမ်းတွင် နေထိုင်လျက်ရှိသော ဦးစိုးဝင်း+ဒေါ်ခင်မိုးမိုးတို့၏ သမီး မဇာဇာအောင်(ခ) မဇာခြည်စိုးမိုး(၂၃)နှစ်အား တစ်မြို့တည်းရှိ သစ်ထုတ်လုပ်ရေးဝန်းအတွင်း နေထိုင်သူ ငအေးမြင့်(၅၅)နှစ်က ခွေးအကျင့် ကျင့်သွားခဲ့သည်။ ဤဖြစ်ရပ်သည် ဦးဇင်းတို့၏ လူမျိုး၊ ဘာသာနှင့်သာသနာကို စော်ကားသည့်အပြင် မရှိဆင်းရဲ နွမ်းပါးရှာသည့် ထိုမိန်းကလေးငယ်အပေါ် ငအေးမြင့်(၅၅)နှစ်၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများကပါ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စော်ကားခဲ့ကြပါသည်။
ထိုအမှုအား သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ရှေ့နေများ၊ တရားဥပဒေဝန်ထမ်းများထံ အမှုဖွင့်တိုင်ကြား၍ ရိုးသားမှန်ကန် သော မြန်မာမိန်းမလေးတစ်ဦးမှ ဥပဒေနှင့်အညီ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း အကျင့်ပျက်ရဲဝန်ထမ်းအချို့၊ အကျင့်ပျက်ရှေ့နေအချို့၊ အကျင့်ပျက်ဥပဒေအရာရှိ၊ မတရားသူကြီးအချို့တို့မှ တရားခံမွတ်ဆလင် ခွေးမသားနှင့် ပူးပေါင်းကာ ရိုးသားမှန်ကန်သော မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ ဘဝ၊ အရှက်၊ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆက်လက်ဖျက်ဆီးရန် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားအား ထုတ်နေကြပါသည်။
ထိုမိသားစုမှာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော လက်လုပ်လက်စား ဘဝများဖြစ်ပါသည်။ ဆွေမျိုးအသိုင်းအဝိုင်း အင်အားလည်းမရှိပါ။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော်လည်း ထိုမိသားစု၊ ထိုမိန်းကလေးသည် အကျင့်စာရိတ္တပျက်ယွင်းခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ စားဝတ်နေရေးကို ရိုးသားစွာ ရုန်းကန်ရပ်တည်လျက်ရှိပါသည်။ မဇာဇာအောင်(ခ)ဇာခြည်စိုးမိုး၏ အမျိုးသားရေးအသိ၊ ဘာသာရေးအသိ၊ ရိုးသားမှန်ကန်မှုကို ရာနှုန်းပြည့်ယုံကြည်သည်ဖြစ်ပါ၍လည်း သမ္မတကြီးထံ ယခုကဲ့သို့ ရဲဝံ့စွာတင်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
သမ္မတကြီးအား ဆင်းရဲနွမ်းပါးပြီး ရိုးသားမှန်ကန်သော မြန်မာမိန်းကလေးတစ်ဦး၏ မတရားနှိပ်စက် အနိုင်ကျင့်ခံရခြင်း အပေါ် ကောင်းစွာရပ်တည် ကာကွယ်ပေးနိုင်ကြပါစေရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
“ဒီတစ်ခါလည်း မုဒိန်းမှုပါပဲ” အပိုင်း(၅)
ဒီတစ်ခါလည်း မုဒိမ်းမှုပါပဲ အပိုင်း (၅)
by Wira Thu on Sunday, December 9, 2012 at 6:34am ·
“အမှုလိုက်ကောင်း၍ ရှေ့နေအချုပ်ခံရ” အမှန်တရားအတွက် အမှုလိုက်ပေးနေသူ ရှေ့နေအား ဌာနဆိုင်ရာ အာဏာရှင်များ ပူပေါင်း၍ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ အမှုဆင်ကာ အာမခံမပေးဘဲ ဖမ်းဆီးချူပ်နှောင်ထားချင်းအား ဖြေရှင်းပေးပါရန် အသနားခံတင်ပြ တိုင်တန်းခြင်း။
၁။ အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်း (၉/မမန(နိုင်)၀၁၇၀၄၂ အထက်တန်း ရှေ့နေ၊ (စဉ်-၂၂၀၆၇)၊ အ.မ.က (၁၄) ကျောင်းဝင်း၊ ဟော်ကုန်းရပ်၊ ရ.က.က (၃)၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ နေသူမှ အောက်ပါအတိုင်း ရိုသေစွာ တင်ပြအပ်ပါသည်။
၂။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား စွဲဆိုထားသော အမှုဖြစ်လာရခြင်းမှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ ချယ်ရီလမ်းထိပ်၌ အိမ်ဆောက်လုပ်နေသော အိမ်ပိုင်ရှင် ဦးသန်းထွေးမှ ကန်ထရိုက် ဦးသိန်းစိုးအား အလုပ်အပ်ပြီး (၁) ထပ်အထိ ဆောက်လုပ်ပြီးစီးချိန်တွင် လုပ်ခငွေကျပ် (၉၃၂) သိန်းသာရှင်းပေးပြီး ကျန်ငွေ (၅၆၈) သိန်းအားတောင်းရာ အိမ်ရှင် ဦးသန်းထွေးမှ အလုပ်ဆက်မဆင်းခိုင်းတော့ဘဲ အလုပ်လာလုပ်ရန်မလိုတော့ကြောင်းပြော၍ နှင်ထုတ်ခဲ့သဖြင့် ကန်ထရိုက် ဦးသိန်းစိုးမှ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား ရှေ့နေငှါးရမ်းခဲ့ရာ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှ ကျန်ငွေရလိုမှု တရားမမှုဖြင့်သာ တရားစွဲဆိုပေးခဲ့ပါသည်။ အိမ်ရှင်ဦးသန်းထွေးမှ ၎င်းအပေါ် တရားစွဲဆိုထားသဖြင့် မဟုတ်မမှန် လုပ်ကြံပြီး ကန်ထရိုက် ဦးသိန်းစိုးသည် ၎င်းထံမှ ငွေများအား အလွဲသုံးစားလုပ်သည်ဟု ဆိုကာ ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စေခဲ့ပါသည်။ ဦးသိန်းစိုးမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းသူဖြစ်သောကြောင့် ပြင်ဦးလွင်မြို့၊ စစ်ဆေးရုံမှ Br.အောင်ဝင့်သူနှင့်ပြသနေရ၍ ဦးသိန်းစိုး၏ မိတ်ဆွေမှ ဆေးမှတ်တမ်းသွားယူရာ Br.အောင်ဝင့်သူမှာ သင်တန်းသွားနေသဖြင့် ၎င်း၏သူငယ်ချင်း Br.အောင်ဇော်ထက်နှင့်တွေ့၍ Br.အောင်ဇော်ထက်မှ ဦးသိန်းစိုး ခံစားနေရသောရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏အထက်အရာရှိဖြင့် ဆေးမှတ်တမ်းစာအုပ် ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဦးသိန်းစိုး၏မိသားစုဝင်များ ပြင်ဦးလွင်မြို့ တရားရုံးတွင် အမှုစစ်ဆေးနေသော ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းထံလာရောက်ပြီး ဦးသိန်းစိုးမှာ ကျန်းမာရေးမကောင်း၍ အာမခံလျှောက်ထားပေးပါရန် တောင်းဆိုလာ၍ ထိုဆေးစာအုပ်မူရင်းဖြင့်ပင် မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိထံ လိပ်မူပြီး အချုပ်ရမ္မန် ကာလအတွင်း တရားရုံးသို့ အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ရာ မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိနှင့် မြို့နယ်တရားသူကြီးတို့မှ စီစစ်ပြီး အာမခံပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းအာမခံရရှိမှုအပေါ် တရားလိုဦးသန်းထွေးမှ မကျေနပ်ဘဲ ထိုဆေးစာအုပ်အား ဥပဒေအရာရှိထံမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ယူပြီး စစ်တက္ကသိုလ်၊ ပထဝီဝင် ဌါနမှ ဒေါ်ခင်စိုးစိုးမျိုးနှင့် ပူးပေါင်း၍ စစ်ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကာ လူနာနေ့စဉ်မှတ်တမ်းများ မှတ်ထားသည့် လယ်ဂျာ စာအုပ်နှင့် တိုက်ကြည့်ရာ ဦးသိန်းစိုးနာမည် မပါရှိသဖြင့် ထိုဆေးမှတ်တမ်းအား ရေးဖြည့်ပေးသူ၊ စည်းတံဆိပ်ရ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးသူ Br.အောင်ဇော်ထက်နှင့် ဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်တို့အား စစ်ဆေးရုံ၊ တပ်မှူးထံ တိုင်ကြားရာ ၎င်းတို့(၂)ဦးမှ ဦးသိန်းစိုးနာမည်ဖြင့် ဆေးစာအုပ်အား ထုတ်ပေးခဲ့တာမှန်သော်လည်း နေ့စဉ်ဆေးကုသသည့် လူနာမှတ်တမ်း၌အရေးသွင်းခဲ့သဖြင့် ၄င်းဌာနမှဝန်ထမ်း(၂)ဦးထိခိုက်မည်စိုးသော ကြောင့် အာမခံလျှောက်ထားပေးသူ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအားမူလကတည်းက ဒုက္ခပေးချင်သူ ဦးသန်းထွေးနှင့် ပူးပေါင်း၍ “အဆိုပါဆေးစာအုပ်မှာ ဦးသိန်းစိုးနာမည်ဖြင့် ထုတ်ပေးခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဘဲ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှ ၎င်း၏ဇနီးကျောင်းဆရာမအတွက် ကျောင်း၌ ဆေးခွင့်ယူရန် အကူညီတောင်းခံလာ၍ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်း၏ဇနီးအတွက် ထုတ်ပေးခြင်းသာဖြစ်ပါသည်ဟု ထွက်ဆိုခဲ့ပြီး နောက်မှ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းက တရားခံဦးသိန်းစိုး အတွက်ဟု နာမည်ဖြည့်စွပ်ပြင်ဆင်ပြီး တရားရုံး၌ အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ပါသည်”ဟု ပိရိစွာ မဟုတ်မမှန်လုပ်ကြံ ဇာတ်ဆင်၍ ဦးသိန်းစိုးအတွက် ဆေးစာပြုလုပ်ပေးသူ ဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်မှပင် တရားလိုပြုလုပ်၍ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား ပြင်ဦးမြို့နယ်ရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
၃။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအနေဖြင့် ဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်မှာ မည်သို့ပုံသဏ္ဍာန်ရှိကြောင်း၊ မည်သည့်ဌာနမှဖြစ်ကြောင်း သိရှိခြင်းမရှိသလို ၎င်း၏နာမည်ကိုပင် မကြားဖူး မသိဖူးပါ။ ဆေးစာအုပ်အား ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းကိုယ်တိုင် စစ်ဆေးရုံသို့ လာယူခြင်း …..ဟု စွပ်စွဲတိုင်ကြားခဲ့သော်လည်း ထိုနေ့တွင် ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှာ ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ် တရားရုံးနှင့် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင် တရားရုံး၌ အမှု(၆) မှုခန့်ရှိ၍ အမှုစစ်ဆေးနေ၍ မအားလပ်ပါ။ ထိုသို့သွားရောက်ရန်လည်း အချိန်မရှိပါ။ ၎င်းတို့စွပ်စွဲသလို ပြုလုပ်ခဲ့မည်ဆိုပါကလည်း ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းကိုယ်တိုင်ပင်သွားယူစရာမလိုပါ။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်း၌ ရှေ့နေတပည့်များစွာရှိ၍ တပည့်များအား သွားယူခိုင်း၍ ရပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းဇနီးမှာ ကျောင်းဆရာမတစ်ဦးဆိုသည်မှာ မှန်သော်လည်း ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းတို့ မိသားစုမှာ အဆိုပါကျောင်းဝင်းအတွင်းပင် နေထိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းတို့ အိမ်အနီးတွင်ပင် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးမှာ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သောကြောင့် မမှန်ကန်သောခွင့်အား ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ခွင့်ယူမည်ဆိုပါကလည်း ကျောင်းဆရာမဆိုသည်မှာ စစ်ဘက်မှ မဟုတ်၍ စစ်ဆေးရုံမှ ဆေးစာမလို၊ ပြည်သူ့ဆေးရုံမှ ဆေးစာဖြင့်ပင်ရပါသည်။ တရားလိုဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်မှ ၎င်းတို့ စစ်ဆေးရုံတံဆိပ်ဝိုင်း၊ ၎င်း၏စည်းတံဆိပ်တုံး၊ လက်ရေးလက်မှတ်တို့ဖြင့် ရေးသားပေးလိုက်သော ဆေးမှတ်တမ်းအားအတုဟုဆိုလျှင် ထိုသို့ပြုလုပ်ပေးသူ ၎င်းကိုယ်တိုင်ပင် တရားခံသာဖြစ်နေပါသည်။
၄။ ၎င်းစွဲဆိုသောအမှုအား ရဲမှ နှစ်ဘက်သက်သေများ စစ်ဆေးပြီးနောက် (ပုဒ်မ-၄၂၀) ဖြင့်သာ ဥပဒေအရာရှိထံ တင်ပြခဲ့သော်လည်း ဥပဒေအရာရှိမှ (ပုဒ်မ-၄၆၈/၄၇၁)တို့ဖြင့် ထပ်မံဖြည့်စွက်၍ တရားရုံးသို့ အမှုတင်ခဲ့ပါသည်။ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (ပုဒ်မ-၄၆၈) နှင့် (၄၇၁) တို့မှ အလွယ်တကူစွဲဆိုရသည့် ပုဒ်မမျိုး မဟုတ်ပါ။ ထိုပုဒ်မအား ကျူးလွန်ခဲ့သည်ဆိုသည့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးကဲတစ်ဦး၏ ခွင့်ပြုမိန့်ပါမှာသာ စွဲဆိုခွင့် ရှိသည်ကို ဥပဒေအရှိ တစ်ယောက်အနေဖြင့် သိပါလျှက်နှင့် ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား အာမခံမရအောင် ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်စေလိုသည့် ဆန္ဒဖြင့် ထိုပုဒ်မများအား ထပ်မံဖြည့်စွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ မြို့နယ်ဥပဒေအရာရှိသည် ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအပေါ်၌လည်း အမြင်မကြည်လင်မှုများ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှာ ငွေကြေးရှေ့တန်းမတင်ဘဲ အမှန်တရားကို ရှေ့တန်းတင်၍ အမှုလိုက်ပေးသူ ပရဟိတရှေ့နေ တစ်ဦးဖြစ်သည့် အတွက် တရားလိုရှေ့နေအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် အချိန်၌လည်း အမှန်ပေါ်ပေါက်စေရေး အတွက်လည်းကောင်း၊ တရားခံရှေ့နေအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရသည့် အချိန်၌လည်း မတရားမခံရစေရေး အတွက်လည်းကောင်း၊ တရားခွင်တရားသူကြီး၊ ဥပဒေအရာရှိ၊ အမှုစစ်ရဲအရာရှိများ၊ တစ်ဘက်ရှေ့နေများနှင့် အချေအတင်ဖြစ်သည်အထိ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်း စစ်ဆေးပေးသည့်အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံမှ မလိုသူ၊ ဖြုတ်ချင်သူများ ရှိပါသည်။ ထိုပြင် ဤဆေးမှတ်တမ်း ကိစ္စ၌လည်း ၎င်းထံလိပ်မူ၍ ဆေးစာမူရင်းဖြင့် အာမခံလျှောက်ထားခဲ့မှု အပေါ် ၎င်းမှစီစစ်ပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ လက်ခံခဲ့သည့်အတွက် တရားလိုဦးသန်းထွေးမှလည်း ဥပဒေ၊ တရားရေး၊ စစ်ဘက်၊ ရဲဘက်၊ .....တို့အားဖိအားပေးသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့်လျှောက်ထားမှုအား လျှောက်ထားပါစေ မူရင်းဖြင့်လျှောက်ထားမှသာ တရားရုံး၊ ဥပဒေရုံးတို့မှ လက်ခံကြခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ထိုဆေးစာမူရင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပြဿနာဖြစ်သောအခါ ပြင်ဦးလွင် ရဲစခန်းမှူးမှ မြို့နယ်တရားသူကြီးနှင့် မြို့ နယ်ဥပဒေအရာရှိထံ ဆေးစာမိတ္တူကူးယူခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာသောအခါ ၎င်းတို့ထံတွင် ဆေးစာအုပ်မူရင်းမရှိဟုဆိုကာ ၎င်းတို့ပါ ပြဿနာတက်မည်စိုးသဖြင့် လိမ်လည်ဖျောက်ဖျက် ထားပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား တရားစွဲဆိုရာ၌လည်း ဆေးစာမိတ္တူဖြင့်သာ တရားစွဲဆိုထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
၅။ နေ့စဉ်မှတ်တမ်း (၁၄-၁၁-၂၀၁၂) နေ့တွင် တရားလိုမလာဟု ဖော်ပြထားပါသည်။ ထိုကြောင့် တရားလိုမရှိဘဲနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာ လူကြီးများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ ပူးပေါင်း၍ ယခုအမှုအား တင်ပို့ စွဲဆိုလာခြင်းဖြစ်ကြောင်းပေါ်လွင်ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်ပင် တရားရုံး၌ အမှုစစ်ဆေးရန် စောင့်ဆိုင်းနေသော ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား လက်ထိပ်ခတ်၍ အချုပ်ခန်းထဲသို့ ချက်ချင်းထည့်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှာ အသည်းကြီးရောဂါ၊ ရင်ကြပ်ရောဂါ၊ အသည်းရောင် “C” ပိုးရောဂါ၊ အသက်ရှူကျပ် အမောဖောက်ရောဂါများ နှစ်ရှည်လများစွာ ခံနေရပြီး ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများ၌ ယနေ့တိုင်ပြသနေသည့်အပြင် လွန်ခဲ့သည့် (၆) လကမှ အူကျွံ၍ ဆေးရုံသို့တက်ရောက်ခွဲစိတ် ကုသမှုခံယူထားရသူတစ်ဦး ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအတွက်ကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများတွင် ယခုလက်တလောပြသနေရသည့် ဆေးခန်းများဖြင့်ပင် ထိုနေ့က ခိုင်လုံသော အာမခံသူ (၂) ဦးဖြင့် အာမခံလျှောက်ထားခဲ့ရာ ဒုတိယမြို့ နယ်တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းညို ရှင်းလင်းက သက်သေခံချက်များ ရယူပြီးမှ အာမခံပေးရန် သင့်/မသင့် စဉ်းစားမည်ဟုဆိုကာ အာမခံအား ပယ်ခဲ့ပြီး (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နေ့သို့ ရုံးချိန်း ချိန်းဆိုခဲ့ပါသည်။
၆။ အမှုတွင်အဓိက သက်သေအဖြစ်ပါဝင်သည့် တရားလိုဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်မှာ ရွှေဘို စစ်ဆေးရေးသို့ မကြာခင်မှ လိုက်ပါသွားကြောင်း၊ တရားလိုပြ သက်သေ Br.အောင်ဇော်ထက်မှာလည်း ငလျင် ဘေးဒဏ်သင့် ခံရသောရွှေဘိုမြို့ သို့ ဆေးအကူဖြင့် လိုက်ပါသွားခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရပါသည်။ ၎င်းတို့မရှိပါဘဲလျှက် ကြိုတင်ချုပ်နှောင်ပြီး အပြစ်ရစေရန်အတွက် တရားစွဲမည့်သူ သက်သေခံမည့်သူ မရှိဘဲ အမှုတင်စွဲဆိုပြီး ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား ဖမ်းဆီးချုပ်နှောင်ထားခဲ့ပါသည်။ ရုံးတော်မှလည်း သက်သေခံချက်ရယူပြီးမှ အာမခံပေးရန် စဉ်စားမည်ဟု ဆိုသော်လည်း (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နေ့၌ ထိုအမှုတွင် သက်သေလာခံရန်အတွက် မည်သည့်သူကိုမျှ ဆင့်ခေါ်စာထုတ်၊ ဆင့်ခေါ်ဆိုပေးခြင်းမရှိပါ။
၇။ (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား စွဲဆိုထားသောအမှု၏ တရားခွင်တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းညိုရှင်းလင်း ရှောင်တခင် ခွင့်(၃)ရက်ယူသွားသည်ဟုဆိုကာ အာမခံထပ်မံ မလျှောက်ထားနိုင်ရန် ရှောင်တိမ်းသွား ပါသည်။ ထိုပြင် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ အခြားမြို့ နယ်တစ်ခုခုသို့ ရုံးပြောင်းစစ်ဆေးပေးရန် ပြစ်မှုအထွေထွေမှု ဖြင့် ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်သို့ တက်ရောက်ထားသဖြင့် မြို့ နယ်တရားရုံးသို့ အမှုတွဲတောင်း ခေါ်လာ၍ ခရိုင်တရားရုံးသို့ ပေးပို့လိုက်ပါသည်ဟုဆိုပြီး (၂၆-၁၁-၂၀၁၂) နေ့သို့ ရုံးချိန်းထပ်မံချိန်းဆိုကာ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမှာ မတရားချုပ်နှောင်ခံ ခဲ့ပြန်ပါသည်။
၈။ အထက်ပါကဲ့သို့ ရုံးချိန်းနေ့ရောက်မှ တရားသူကြီးမှ ရှောင်တခွင် ခွင့်ယူသွားခြင်း၊ တရားလိုပြ သက်သေများ စစ်ဆေးပြီးမှ အာမခံပေး/မပေး ဆုံးဖြတ်မည်ဟုဆိုသော်လည်း အမှုစစ်ဆေးရန် ထိုသက်သေများအား မည်သူ့ကိုမျှ ဆင့်ခေါ်စာမထုတ်ထားခြင်း၊ ခရိုင်တရားရုံးသို့ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ တက်ရောက်ထားသောအမှုမှာ (၂၀-၁၁-၂၀၁၂) နေ့ကမှ ဖြစ်သည်ကို (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) နေ့ ရုံးချိန်းနေ့တွင် အမှုတွဲတောင်းခေါ်ပါသည်ဆိုပြီး ရုံးချိန်းထပ်မံ ချိန်းဆိုခဲ့ခြင်းတို့မှာ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား အာမခံမရရှိစေရန်အတွက် ဥပဒေနှင့် တရားရေးတို့မှ ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်း၍ နှိပ်ကွပ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
၉။ ပြင်ဦးလွင်ခရိုင်အတွင်းရှိ အခြားနယ် မြို့ နယ်တရားရုံးသို့ ပြောင်းလျှောက်ထားခဲ့ခြင်းမှလည်း အပေါ်ယံ ကြည့်လျှင် ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအတွက် စာနာစိတ်ဖြင့် လုပ်ပေးသလိုမျိုးနှင့် အမှန်တကယ်၌ အခြားဝေးလံသည့် နေရာဒေသ၌ နေရေးစားရေး ဒုက္ခရောက်စေရန်အတွက်လည်းကောင်း၊ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းမိသားစုနှင့် ပညာသင်ကြား မှီခိုနေသူ ရှေ့နေတပည့်များအားကိုးရာမဲ့ ဖြစ်စေရန်တွက်လည်းကောင်း၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ တွင် ထားပါကလည်း တစ်နည်းနည်းဖြင့် အာမခံရရှိသွားမည်စိုး၍လည်းကောင်း၊…..ရည်ရွယ်၍ လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအား ဒုက္ခရောက်စေလိုသောဆန္ဒဖြင့် ဦးသန်းထွေး၊ ဒေါ်ခင်စိုးစိုးမျိုး၊ စစ်ဘက်၊ ရဲဘက်၊ တရားရေး၊ ဥပဒေ….တို့မှ ပူးပေါင်း၍ ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း (၂၁-၁၁-၂၀၁၂) တွင် အာမခံမရသည့်ပြင်၊ အမှုတွဲတစ်ခုလုံး ခရိုင်တရားရုံးသို့ ရောက်ရှိပြီး၊ ၎င်းခရိုင်တရားရုံး၌ (၂၇-၁၁-၂၀၁၂) တွင် တရားလိုမလာဟုဆိုကာ ရုံးချိန်းထပ်မံပေးခြင်းဖြင့် အချုပ်ထဲကြာကြာနေရအောင် ဖန်တီးခဲ့ပါသည်။ (၆-၁၂-၂၀၁၂) တွင် ဗိုလ်ကြီးသက်ခိုင်မြင့်အား ခရိုင်တရားရုံး၌ အစစ်ခံရန်ရုံးချိန်းပေးသော်လည်း ၎င်းအရာရှိမှာ မရောက်ရှိဘဲ (၁၃-၁၂-၂၀၁၂) တွင် ထပ်မံ၍ ရုံးချိန်းပေး ဆင့်ခေါ်မှုများသည် အချုပ်ထဲနေရသူ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းအတွက် များစွာနစ်နာနေပါသည်။ ၎င်း(၁၃-၁၂-၂၀၁၂) ရက်ဆိုလျှင် မတရားချုပ်နှောင်သည့် ရက်များမှာ ၂၉ ရက်ရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
၁၀။ ထို့ကြောင့် ငွေရှင်ကြေးရှင်၊ အာဏာရှင်များမှ ရာထူးအားကိုး၊ ငွေအားကိုး၍ အမှန်မှ အမှားသို့ ရောက်အောင်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းများအား ရပ်တန့်ပေးပါရန်နှင့် အပြစ်မရှိသူ အပြစ်မရစေရေးအတွက် လူသားချင်းစာနာပြီး ဥပဒေကိုလေးစားသည့်အနေဖြင့် ပြန်လည်စီစစ်ဆောင်ရွက်ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံတင်ပြအပ်ပါသည်။
အမက (၁၄) ရပ်ကွက်ကြီး (၃) ဖော်မွန်ရပ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ ။
(မေမြို့သူသမီးပျိုလေးကို မူဆလင်ကုလားက မုဒိမ်းကျင့်ပြီး ရဲ၊တရားသူကြီးနှင့် ရှေ့နေတွေကို အိပ်ကပ်ထဲထည့်စားကာ တရားခွင်မှာပါ ထပ်မံအနိုင်ကျင့်တဲ့အမှုပါ။ ဒီအမှုမှာ အနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့ အညတရသမီးပျိုလေးဘက်မှ ရပ်တည်ပြီး ခုခံကာကွယ်ပေးတဲ့ ရှေ့နေဦးဇော်ဝင်းကို လုပ်ကြံပြီး တိုင်ကြားလိုက်လို့ ရှေ့နေ ဦးဇော်ဝင်းကို ရဲကဖမ်းဆီးထားပါတယ်။
လူကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တယ်၊ ဥပဒေကိုလည်းအနိုင်ကျင့်တယ်၊ အနိုင့်ကျင့်ဝါဒ ကျင့်သုံးနေတဲ့ အဓမ္မဝါဒီတွေ ဒီလိုဘဲ ထာဝရအနိုင်ရနေမှာလား? စောင့်ကြည့်ပါဦးနော်၊ အဓမ္မကထာဝရနိုင်ရိုး၊ အဓမ္မကထာဝရလွှမ်းမိုးတယ်ဆိုတာ ဘယ်နိုင်ငံမျိုးမှာမှ မရှိခဲ့ရိုး အမှန်ပါ။ တစ်နေ့နေ့တော့ မုချကျဆုံးမှာပါပဲ။ အဲဒီအခါကျမှ ငိုမပြနဲ့နော်။
ကရုဏာနှလုံးသားရဲ့မုဒိတာအပြုံးကငိုပြလည်း“လိုတရစေ” လုပ်ပေးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘူး။)
ဦးပဉ္ဇင်း ဝီရသူ (မစိုးရိမ်)
r by Wira Thu on Saturday, January 12, 2013 at 8:52am ·
အကြောင်းအရာ။ ။ မြို့ပြဧရိယာအတွင်း ကောင်ရေရာချီပြီး စီးပွားဖြစ် ကြက်သတ်လျှက်ရှိသောကြောင့်
ရပ်ကွက်နေပြည်သူများအတွက် စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုများ ကြုံတွေ့ခံစား နေရသည့်အပေါ် တိုင်ကြားခြင်း။
အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာစံမြို့နယ်၊ ၈၉လမ်း၊ ၂၃လမ်းနှင့် ၂၄လမ်းကြား၊ သင်္ဘောတန်းရပ်ကွက်၊ အကွက်အမှတ်(၁၅၉)အတွင်း၌ ကြက်သတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တွင်တွင် ကျယ်ကျယ် စီးပွားဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွတ်လျှက်ရှိရာ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းစေခြင်း၊ ရပ်ကွက်နေလူအများ အတွက် ကိုယ်စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရခြင်း၊ ကျန်းမာရေးထိခိုက်စေခြင်း စသဖြင့်တွေ့ကြုံခံစားနေရပါသောကြောင့် ဆိုင်ရာမှလိုအပ်သလို စိစစ်ရှင်းလင်းပေးစေလိုပါကြောင်း တင်ပြတိုင်းတန်းအပ်ပါသည်။
အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်း ကြက်သတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ တစ်စထက်တစ်စတွင်ကျယ်စွာလုပ်ကိုင်လာလျှက်ရှိရာ ယခုအခါ စီးပွားဖြစ်ကြက်သတ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူ (၁၁)ဦးထက်မနည်းရှိနေပြီး တစ်အိမ်လျှင်ကြက်ကောင်ရေ အနည်းဆုံးအကောင်(၁၀၀)မှ အကောင် ၄ဝဝ-၅ဝဝ အထိ နေ့စဉ်ညတိုင်းသတ်ဖြတ်လုပ်ကိုင်နေကြခြင်းဖြစ်သည်။
ညစဉ် ည(၁၂)နာရီမှစတင်၍ မိုးလင်းအထိ ကြက်ကောင်ရေ ရာနှင့်ချီ၍ ညလုံးပေါက်သတ်ကြခြင်းဖြစ်ရာ ကြက်အော်သံများကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်နေအိမ်များရှိ ပြည်သူများအနေဖြင့် အိပ်ကောင်းခြင်းမအိပ်ရတော့ဘဲ အိုကြီး အိုမ အရွယ်နှင့် ကလေးသူငယ်များအပါအဝင် အတန်းပညာသင်ယူနေသူ ကျောင်းသားကျောင်းသူများအတွက် စိတ်ပိုင်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်နစ်နာမှုကြုံတွေ့ခံစားနေရခြင်းဖြစ်သည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်အများစုအတွက်လည်း မနက်အာရုဏ် ဘုရားဝတ်တက်၊ ဆွမ်းချက်စသောကိစ္စများ၌ ကြီးစွာသောအနှောင့်အယှက်သဖွယ်ဖြစ်နေရပါသည်။
ကြက်သတ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူအနေဖြင့် ၎င်းရပ်ကွက်ထဲ၌ မြေကွက်များထပ်မံဝယ်ယူလျှက်လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လုပ်ကိုင်လျှက်ရှိရာ ၂၆လမ်းမကြီးနှင့်နီးသော မြို့ပြဧရိယာအချက်အချာနေရာတစ်ခုသည် မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့် မတင့်တယ်၊ မလျော်ကန်ဖွယ် ကြက်သတ်ရပ်ကွက်ကြီးအသွင်ပြောင်းလဲသွားမည်ကို စိုးရိမ်ဖွယ်ရာပင် ဖြစ်ပါသည်။
လောလောဆယ်၌ ရပ်ကွက်အတွင်း ညစဉ်ညတိုင်း ကြက်ကား Light Truk အနည်းဆုံး ၃-၄ စီးထက်မနည်း ပုံမှန်ဝင်ရောက်နေပြီး ညဘက်ကြက်ကားများဝင်လာလျှင် ရရှိသော အနံ့အသက်များကြောင့်လည်းကောင်း၊ ညလုံးပေါက် ကြက်သတ်သည့် ကြက်အော်သံဆူဆူညံညံများကြောင့်လည်းကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ရှိပြည်သူများအနေဖြင့် များစွာ စိတ်ညစ်ညူးကြရပါသည်။
၎င်းပြင် ကြက်သတ်ရာမှဖြစ်ပေါ်လာသည့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများအား နီးရာမြောင်းထဲ စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်လျှက် ရှိခြင်း၊ တခါတရံတွင် ကြက်မွေးများအား ပြန်ရောင်းရန်အတွက် လမ်းပေါ်ထွက်၍ ဖျာခင်းနေလှန်းခြင်း၊ တချို့ဆိုလျှင် ကြက်ထည့်မည့်ရေနွေးအိုးကိုပင် လမ်းပေါ်ထွက်တည်ခြင်း၊ ကြက်သွေးထည့်ထားသော တာရာပုံးများ၊ ကန်များကိုလည်း လမ်းပေါ်ထုတ်ထားခြင်း စသဖြင့်ထင်သလိုပြုလုပ်လျက် စီးပွားရှာနေကြသည်ဖြစ်ရာ အများပြည်သူအနေဖြင့် လွန်စွာ သည်းမခံနိုင်ဖြစ်ကြရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ မြို့ပြဧရိယာအတွင်း ယခုကဲ့သို့ ကြက်များကောင်ရေရာချီထောင်ချီ၍ စီးပွားဖြစ်သတ်ဖြတ်လုပ်ကိုင် နေခြင်းသည် ခေတ်မှီမြို့ပြ မန္တလေးမြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့် လိုက်ဖက်ညီမှု မရှိသကဲ့သို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်း၊ထိခိုက်၊ ပျက်စီးစေခြင်းနှင့်တကွ အများပြည်သူတို့ ကိုယ်နှင့်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာရေးအပေါ် အနှောက်အယှက်ပေးနေပါသော ကြောင့် သက်ဆိုင်ရာအနေဖြင့် အမြန်ဆုံးကွင်းဆင်း၊ စိစစ်၊ ရှင်းလင်းပေးနိုင်စေရေး လေးစားစွာတင်ပြတိုင်းတန်းအပ်ပါ သည်။
တင်ပြတိုင်းတန်းသူ ရပ်ကွက်သူ ရပ်ကွက်သားအနေဖြင့် တစ်အိမ်ထောင်လျှင်တစ်ဦးကျစီ အောက်တွင်စုပေါင်း လက်မှတ်ရေးထိုးအပ်ပါသည်။
၁။ ဦးထွန်းလင်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၀၀၈၅၀ သင်္ဘောတန်းရပ်
၂။ ဒေါ်မာမာမြင့် ၉/မနတ(နိုင်)၁၀၀၈၇၆ ။
၃။ ဦးအံ့ဌေး ၉/မနတ(နိုင်)၀၁၆၂၂၅ ။
၄။ ဦးမြတ်သိန်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၅၂၂၁၉ ။
၅။ ဦးကျော်သီဟလှိုင် ၉/မနမ(နိုင်)၀၀၃၄၈၈ ။
၆။ ဦးသိန်းထွန်းဝင်း ၉/မနတ(နိုင်)၁၁၇၄၃၈ ။
၇။ ဦးကျော်စိုးဝင်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၀၃၇၅၉ ။
၈။ ဦးငွေသောင်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၇၁၆၃၄ ။
၉။ ဦးခင်မောက်ဖုန်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၁၇၄၂၇ ။
၁၀။ ဦးအေးမင်း ၉/မနတ(နိုင်)၀၅၃၉၇၄ ။
၁၁။ ဒေါ်စန္ဒာလင်း ၉/မနတ(လ)၀၀၃၄၉၉ ။
၁၂။ မကြည်စန်း ၉/မနတ(နိုင်)၁၈၀၀၄၁၇ ။
၁၃။ မအေးမြင့် (မှတ်ပုံတင်ပျောက်) ။
၁၄။ မစန်းစန်းထွေး ၉/မနတ(နိုင်)၀၀၀၃၉၆ ။
၁၅။ တင်ခိုင် ၅/မန(နိုင်)၁၉၄၅၀၈ ။
၁၆။ မကျော့ ၉/မရတ(နိုင်)၀၆၂၁၇၉ ။
၁၇။ ဒေါ်စန်းရီ ၉/တတန(နိုင်)၀၃၃၃၃၂ ။
၁၈။ မစန္ဒာ ၉/မနတ(နိုင်)၁၀၀၈၇၅ ။
၁၉။ ဦးမျိုးမင်းဇော် ၉/မနတ(နိုင်)၁၀၁၅၀၅ ။
“ကြိုက်ရာသွား ရုံးမကလို့ တိုင်းမှူးကြီး ဖြစ်နေဖြစ်နေ စောက်ဂရုမစိုက်ဘူး၊ မိုက်လို့လာနေတာ မင်းတို့ ထက်မိုက်တယ်၊ အကုန်သတ်ပစ်မယ်”။
“ဦးတင်အေး-ကို ကြက်မွှေးပစ်ခ တစ်လ(၆၀၀၀၀) ပေးထားတာ ကြိုက်တဲ့ဆီသွား ဂရုမစိုက်ဘူး”
“စည်ပင်ကို ပိုက်ဆံပေးပြီး ကြက်မွှေးပစ်ခိုင်းတာ ဗိုလ်ကြီးတင်အေး လက်ထက်ကတည်းက”
“မင်းတို့ထက်မိုက်လို့ လာနေတာ သတ်ရဲဖြတ်ရဲတယ်”
“စည်ပင်တိုင်လည်း ကြောက်စရာမလိုဘူး၊ နှစ်ထောင်သုံးထောင်ပေးလိုက်ရင် အေးဆေးပါ။”
အိမ်ပိုင်ရှင်၏ အစ်မဖြစ်သူ မနိုးက-“င့ါညီမနှင့် စကားများတာ လုံးဝမကြေနပ်ဘူး၊ ညက မကြားလိုက်လို့ ညည်းတို့သက်သာသွားတယ်၊
09-402620024 ဦးအောင်ကို- တ/ဆ မမာမာမြင့်။
by Wira Thu on Sunday, December 30, 2012 at 1:42am ·
လွန်ခဲ့သော (၄)နှစ်ခန့် (၂၀၀၈) ၅-လပိုင်းခန့်တွင် ရဲမင်းဆိုသူ အသက် (၁၃) နှစ်အရွယ် လူမမည် ကလေး တစ်ယောက်ကို ကျွန်တော်၏ အစ်မဖြစ်သူ မဖြူပြာအောင်မှ ၎င်း၏ယောက်ျား (စန်းမောင်)၏ နှိပ်စက်ဒဏ်ကို မခံနိုင် ခြင်း၊ သွားစရာနေရာ မရှိခြင်း၊ မိဘမဲ့ဖြစ်ခြင်း စသည်ကို အကျိုးအကြောင်းစုံလင်ပြောကြားပြီး ကျွန်တော်မှ ခေတ္တ လက်ခံထားရန် မေတ္တာရပ်ခံသဖြင့် လက်ခံထားခဲ့မိရာမှ ယနေ့အချိန်ထိ ဒုက္ခဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကြီးကို ခါးစည်းခံနေရ သည်မှာ (၄)နှစ်ခန့်ရှိပါသည်။
ထိုကလေငယ်ကို လက်ခံထားစဉ် (စန်းမောင်)မှ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်း၊ ရန်ရှာခြင်း၊ ဒုက္ခမျိုးစုံရောက် အောင် လိုက်လံနှောက်ယှက်နေသဖြင့် ၎င်း၏အလုပ်သမားကို ၎င်းတို့ လာရောက်ရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားခြင်း ကိုလည်း မတားရဲပါ။ စန်းမောင်ခေါ်ဆောင်ရာတွင်လည်း ကလေးသူငယ်အား ရိုက်နှက်၍ အတင်းအဓမ္မ ဆိုင်ကယ် ပေါ် တင်ခေါ်သွားသည်။ ထိုကလေးသူငယ်က မလိုက်လိုကြောင်းပြောရာတွင် "မင်းဘထွေးတွေ အားကိုးရှိလို့ ငါ့ကို အာခံတာလား" ဟုပြောပြီး "ကျွန်ပါးမဝနဲ့ မင်းကငါ့ကျွန်" ဟုပြောပြီး ခေါ်သွားရာ ထိုနေ့ည (၇)နာရီလောက်တွင် ရဲမင်းဆိုသူ ကလေးငယ်သည် ကျွန်တော်၏ လမ်း-၂၀ (၈၀x၈၂) လမ်းကြားရှိ အိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကာ ထို ကလေးငယ်သည် ဒဏ်ရာဗလပွနဲ့ မတရားငိုယိုပြီး ဦးစန်းမောင်ကိုကြောက်သဖြင့် ၂၈-လမ်း-၈၂လမ်းထောင့်ရှိ ၎င်း၏ကဖေးဆိုင်မှ ၎င်းမရှိခိုက် ထွက်ပြေလာကြောင်း ပြောကြားရာ ကျွန်တော်၏ ဖခင်မှ စန်းမောင်၏ အန္တရာယ်ကို ကြောက်သဖြင့် ပုလဲငွေရောင်(ရယက) ဥက္ကဋ္ဌ ဦး.............. (ယခုကွယ်လွန်)ထံ အကြောင်းကြား၍ မှတ်တမ်း တင်ခဲ့ပါသည်။
(၃၀.၆.၂၀၀၈)ရက်နေ့တွင် စန်းမောင်းမှ ဖုန်းဖြင့် မကြားဝံ့ မနာသာ ဆဲဆိုခြင်း ၎င်း၏ကျွန်ကို မင်းမိန်းမ မင်းအမေ မင်းညီမတို့နှင့် အတူအိပ်ခိုင်းဖို့ ခေါ်ထားတာလား။ ငါတို့ ညီးအစ်ကို နှစ်ယောက် အခုမင်းကို ငါ့ကျွန်ကို ဆိုင်ကပိုက်ဆံခိုးခိုင်းသည်ဟု လိမ်ပြီး မင်းကို ထောင်ထဲထည့်ပစ်မယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်သဖြင့် ရဲမင်းဆိုသူ ကလေး ငယ်က နေဝင်း စန်းမောင်းတို့သည် အမှတ် (၅) အမှတ် (၈) ရဲစခန်းများ၊ မြို့နယ်များ တကယ်ပိုင်ကြောင်း ၎င်းကိုယ် တိုင် လူကြီးတွေထံလက်ဆောင်တွေ မုန့်တွေ ပေးပို့နေကြမို့လို့ သိကြောင်းပြောပြီး စန်းမောင်ကို တိုင်ရန်အဆင့်မြင့် ရဲအရာရှိထံပို့ပေးရန် ပြောကြားသည့်အတွက် ရဲမင်းကို ကျွန်တော် ဇော်မျိုးအောင်၊ ဦးထွန်းထွန်း၊ ဦးစိုးမင်းတို့နှင့် တကွ မန္တလေးတိုင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ ၎င်း၏ဆန္ဒအရ ထိုကလေးငယ်ကို အသေးစိတ် စစ်ဆေးရာ လူကုန်ကူးမှု တားဆီးတိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့မှ တာဝန်ခံကို ခေါ်ပြီး ထိုကလေးကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရန် အပ်လွှတ်လိုက်သည့် တာဝန်ခံမှလည်း ထိုကလေးကို ခဏထားခဲ့ပါ စစ်ဆေးစရာလေးတွေ စစ်ဆေးပြီးမှ ပြန်လွှတ်မယ် ကျွန်တော်မှ မခေါ် ထားချင်လျှင်လည်း လူမှုကယ်ဆယ်ရေးသို့ ပိုပေးမည်ဟု တာဝန်ခံမှပြောရာ ကျွန်တော်လည်း ထိုကလေးကိုမေးရာ ကျွန်တော်နှင့်သာ နေချင်ကြောင်းပြောသဖြင့် စစ်ဆေးပြီးလျှင် ပြန်ပို့ပေးရန်သာ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ကျွန်တော်၊ ဦးထွန်းထွန်းနှင့် ဦးအောင်သာတို့ကို ရဲမင်းရောက်ရှိလာပုံကို မေးပြီး ရဲမင်း၏ အလုပ်ရှင်နှင့် တော်စပ်ပုံကိုလဲ မေးရာ ကျွန်တော်မှ ယောက်ဖတော်ကြောင်းပြောပြီး အစ်မမှ ခဏတာလက်ခံထားပေး ပြောလို့သာ လက်ခံထားရာမှ ခြိမ်းခြောက်ခံရကြောင်းပြောပြခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်လည်း အလုပ်သမားရဲမင်းအပေါ်မှာ စန်းမောင် မည်သည့်ပြစ်မှုကျူးလွန်းထားသည်ကိုလည်း မသိရှိနိုင်ပါ။ (၄.၇.၂၀၀၈)နေ့တွင် စန်းမောင်အား အမှတ် (၈) ရဲစခန်း မှ ဖမ်းဆီးသွားပြီဟု မဖြူပြာအောင် လာရောက်ပြောပြမှသာ အမှုဖြစ်မှန်း သိရပါသည်။ ထိုအချိန်တွင် စန်းမောင်၏ အစ်ကို နေဝင်းသည် ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်သော ၂၂လမ်း (၈၃x၈၄) ကြားသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ၎င်း၏ညီးအမှုကို ပိတ်ပေးပါ မပိတ်ပေးလျှင် နေဝင်းအကြောင်းကောင်းကောင်းသိမည်ဟု ပြောဆိုနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကလည်း ကျွန်တော်တို့ အမှုဖွင့်တိုင်ထားတာမဟုတ်ဘူး လူကုန်ကူးက တိုင်တာဖြစ်ကြောင်း ပြောပြ ခဲ့သည်။ နေဝင်းက မန္တလေးတိုင်း လူကုန်ကူးမှု တားဆီးတိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့က နေဝင်းအတွက်တော့ ဖုန်ခါ သလောက် မပင်ပန်းဘူး တစ်ဖွဲ့လုံးပြုတ်သွားအောင် တိုင်းမင်းကြီးနှင့် ပေါင်းပြီး ဖြုတ်ပစ်မည် ပြီးလျှင်မင်းတို့ အလှည့်ဘဲဟု ခြိမ်းခြောက် သွားပြီး နေဝင်းက မင်းတို့တွေကြည့်ထား အာမခံမရတဲ့ ငါ့ညီကို ဒီနေ့ရအောင် ထုတ်ပြမည်ဟု ပြောဆိုသွားသည်။
၎င်းပြောပြသည့်အတိုင်း ထိုနေ့ည ၅နာရီခန့်တွင် စန်းမောင် အချုပ်ခန်းထဲမှ လွှတ်လားပြီး ၎င်း၏မိန်းမနှင့် သားသမီး ၄ ယောက်ကို မောင်းထုတ်လိုက်ပါသည်။ စန်းမောင်နှင်ချလိုက်သော ကျွန်တော်၏ အစ်မနှင့် တူ တူမ ပေါင်း ၅ ယောက်မှာ သွားစရာနေရာမရှိ အဝတ်တစ်ထည် ကိုယ်တစ်ခုဖြစ်နေသဖြင့် ကျွန်တော်မှ လက်ခံထား ရသည်။ စုစုပေါင်း ၈ ယောက်ကို ခေါ်ယူကျွေးမွေးထားရပါသည်။ ထိုရက်ပိုင်အတွင်း စန်းမောင်မှ ရဲမင်းနှင့် အတူ နေသော အလုပ်သမား ခိုင်မိုးလင်းကို အမှတ် (၈) ရဲစခန်းသို့ ည ၉ နာရီခန့်တွင် ခေါ်သွားပြီး ရဲမင်းကို စန်းမောင်မှ မရိုက်ကြောင်း၊ လစာပေးကြောင်း၊ အခန်းထဲတွင် သောခတ်မထားကြောင်း၊ ဘုရားရှိခိုးလျှင် မဆူကြောင်း၊ လွတ်လပ် စွာထားကြောင်း၊ ရဲမင်းသည် စန်းမောင် ဆိုင်ကောင်တာမှ နေ့စဉ်ပိုက်ဆံခိုးကြောင်း၊ အကျင့်ပျက်နေကြောင်း စသည်ဖြင့် လိမ်လည်ပြောဆိုခိုင်းသဖြင့် စန်းမောင်ကို ကြောက်၍ ၎င်းပြောခိုင်းသည့်အတိုင်း ပြောဆိုခဲ့ရပါသည်။ သူငယ်ချင်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ် သစ္စာမရှိ ဖြစ်မှာကြောက်သဖြင့် စခန်းမှအပြန် ၁၁ နာရီလောက်တွင် ခိုင်မိုး လင်းမှ ၎င်း၏ဆရာကတော်ရှိရာ ၂၀လမ်း (၈၁x၈၂) လမ်းကြားရှိ ကျွန်တော်၏အိမ်သို့ ထွက်ပြေးလာ ပြန်ပါသည်။
ကျွန်တော်မှ ထပ်ပြီး လက်မခံနိုင်ကြောင်း ပြဿနာတက်လိမ့်မည်ဟု ပြောရာ ခိုင်မိုးလင်းမှ မနက်ရောက် လျှင် ရဲမင်းတိုင်သော လူကြီးတွေထံသာ ပို့ပေးပါလို့ ပြောသဖြင့် မနက်မိုးလင်း ရုံးချိန်တွင် ခိုင်မိုးလင်းအား လူကြီး တွေထံပို့ပေးခဲ့ရာ တာဝန်ခံမှ ခိုင်မိုးလင်းသည် အမှုအတွက် သက်သေဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကိုလည်း စန်းမောင်မှ ရိုက်နှက်ထားကြောင်း တို့အတွက် ဆက်လက်အရေးယူဖို့ လိုတယ် ကိုဇော်မျိုးအောင်မှ မခေါ်ထားလျှင် ၎င်းတို့ ကိုယ်တိုင် ပုလဲ (ရယက ဥက္ကဋ္ဌ) ထံ လိုက်၍အပ်နှံသွားပါသည်။
ထိုရက်များတွင် စန်းမောင်၏အစ်ကို ခင်မောင်ဝင်းမှ ကျွန်တော်ဦးအောင်သာနှင့် ကိုထွန်းထွန်းတို့ ၎င်းညီ၏ ဆိုင်မှ အလုပ်သမားများကို ငွေပေးပြီး မဟုတ်မမှန်သာ လုပ်ခိုင်းသည့် အထက်သို့ စာတင်တိုင်ကြားသဖြင့် ကျွန် တော်တို့ကို ရဲအုပ်စိုးဝင်းမှ လာရောက်အစစ်အဆေးခံရန် ရယက မှတစ်ဆင့် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သဖြင့် ဇော်မျိုးအောင်၊ ဦးထွန်းထွန်း၊ ဦးအောင်သာ၊ ရဲမင်း၊ ခိုင်မိုးလင်း စုစုပေါင်း ၅ ယောက်ကို တစ်ဦးချင်း အခန်းတံခါးပိတ်၍ စစ်ဆေး ခံခဲ့ရပါသည်။
ခင်မောင်ဝင်းတိုင်စာတင်သလို ငွေပေးပြီးလိမ်လည်တိုင်ကြားခြင်းမဟုတ်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ ၅ ယောက်သည် နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့နှင့် ရင်းနီးသော ဌာနပေါင်းစုံမှ နေ့စဉ်နှင့်အမျှ စစ်ဆေးခြင်းကို ခံခဲ့ရပါသည်။ အပြင်လောကတွင်လည်း ၎င်းတို့အပါအဝင် ၎င်း၏ဆွေမျိုး တစ်ခုမှလိုက်လံနှောက်ယှက်ခြင်း၊ ဆဲဆို ခြင်း၊ ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းများကို ခံခဲ့ရပါသည်။ (၁၇.၉.၂၀၀၈) နေ့တွင် စန်းမောင်၏ ပြစ်မှု ဥပဒေပုဒ်မ ၃၇၀၊ ၃၄၂၊ ၃၇၄၊ ၃၂၃ အတွက် အစိုးရသက်သေကို ချမ်းအေးသာဇံ မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးတင်မောင်ဝင်း ခုံ၌ သက်သေထွက်ခဲပါသည်။ ထိုသို့ထွက်ဆိုရာတွင် ကျွန်တော်မှ ရဲမင်း ကျွန်တော့်ဆီ ရောက် ရှိလာပုံ၊ ကျွန်တော့်ဆီမှ ရဲမင်းကို စန်းမောင်မှ ရိုက်နှက်၍ ခေါ်ဆောင်သွားသဖြင့် ရဲမင်း နားတစ်ဖက် မကြားရ ကြောင်းသာ သက်သေထွက်ဆိုခဲပါသည်။ (ရက်မသိ- ၉-၂၀၀၈) ရဲမင်းသက်သေထွက်ဆိုရာတွင် မြို့နယ်တရား သူကြီး၏ လက်နှိပ်စက် စာရေးမ.......... သည် ရဲမင်း မှ အသက် ၁၅ နှစ်ဟုထွက်ဆိုရာ စာရေးမ မှ တရားခံ နှင့်ပေါင်းပြီး ရဲမင်းအသက် ၁၈ နှစ်ဟု လိမ်လည်ရိုက်နှိပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အသက်ကို လိမ်လည်မှသာလျှင် တရားခံမှ ကလေးငယ်ပြစ်မှု မကျူးလွန်ကြောင်း ပေါ်ပေါက်ပြီး အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်စေခဲ့ခြင်းအတွက် အဓိက ဖြစ်စေ ခဲ့ပါသည်။
ရဲမင်းသက်သေခံထွက်ဆိုရာတွင် ၎င်းသည် ငယ်စဉ်ကပင် မိဘများကွယ်လွန်သွားသဖြင့် အသက် (၇၀) ကျော် အဘွားအိုတစ်ယောက်နှင့် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခု (၁၂)လပိုင်းတွင် အဘွားနှင့်စကားများကာ အိမ်မှ ထွက်သွား တောင်ငူဘူတာသို့ရောက်ရှိပြီး အမည်မသိ စစ်သားတစ်ဦးနှင့်တွေ့ကာ ၂၈ လမ်း ၈၂ လမ်းထောင့်ရှိ စန်း ကဖေးဆိုင်တွင် အပ်နှံထားခဲ့ကြောင်း၊ ဆိုင်တွင် တစ်လပြည့်၍ လစာတောင်းသည့်အခါ မင်းကို လာပို့တဲ့ စစ်သား ထံမှ (၄၀၀၀၀ိ/)နှင့် ဝယ်ထားတာ မင်းကိုလစာပေးစရာမလိုဘူး၊ ကျွန်တော်လည်း လစာမရဘဲ (၅) လတိတိလုပ်ခဲ့ ရကြောင်း၊ အလုပ်ချိန်ကလည်း ညနေ (၄)နာရီမှ နောက်ရက်မနက် မိုးလင်း (၆)နာရီအထိ လုပ်ကြရကြောင်း၊ မိုးလင်း မဖွင့်ရသောရက်များတွင် တစ်ရက်လျှင် (၁၂)နာရီအလုပ်လုပ်ရကြောင်း ဆိုင်ရှင်စန်းမောင်မှ အလုပ်ခိုင်းရာတွင် ဟဲ့ကောင် ကျွန်တွေ ဟု ပါးစပ်နဲ့သာမက လက်၊ ခြေထောက်နဲ့ ကန် ရိုက်လေ့ရှိပါသည်။ ထွက်မပြေးစေရန် အခန်း တွင် သောခတ်ထားလေ့ရှိပြီး အပေါ့သွားချင်လျှင် ရေသန့်ဘူးထဲ သွားကြရပြီး၊ ခြင်ထောင်မပါဘဲ အိပ်ကြရကြောင်း ကုလားအိမ် ဘုရားမရှိခိုးနဲ့ ဟုလည်းကောင်း၊ (၇.၅.၂၀၀၈) နေ့တွင် ရဲမင်းနှင့် ဖြိုးသူတို့ ထွက်ပြေးရာ မအောင်မြင်ဘဲ ဦးစန်းမောင်တွေ့ရှိပြီး ရိုက်နှက်ခံခဲ့ရပြီး ဘယ်ဘက်နားတစ်ဖက် မကြားရကြောင်း ကိုဇော်မျိုးအောင်၏ အလုပ်မှ ရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင်သွားပြီး စန်းမောင်၏အိမ်တွင် စန်းမောင်မှ နံရံနှင့် ခေါင်းကို တိုက် ပါးနားတွေကို ၎င်း၏လက် အကြီးကြီးနှင့် ရိုက်ကြောင်း၊ ခြေထောက်နှင့် ဗိုက်ကိုကန်ကြောင်း ကျွန်တော် ရဲမင်းမှ ဦးစန်းမောင်ကို ထိုင်ရှိခိုး၍ ရိုက်လို့ဝလျှင် ပြန်မည်ဟုပြောရာ မင်းဘထွေးတွေဆီကိုမပြန်နဲ့ ဟုပြောပြီး ထပ်မံရိုက်နှက်ပြီး အခန်းတွင်းထည့် သောခတ်ထားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရိုက်နှက်ထားသောကြောင့် အလုပ်မလုပ်နိုင်ပါ။ စန်းမောင်ဆိုင်မှ အပြင်သို့သွားချိန်တွင် ကိုဇော်မျိုးအောင်အိမ်သို့ ၂၈ လမ်းမှ လမ်း၂၀ ထိ ထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။
နောက်ရက်တွင် စန်းမောင်မှ ကိုဇော်မျိုးအောင်အား ငါ့ကျွန်ကိုဘာလို့လက်ခံထားတာလဲ မင်းကို ငါတို့ ထောင်ထဲ ရောက်အောင်ပို့ပစ်မယ်ဟု မကြားဝံ့မနာသာဆဲဆိုသဖြင့် အဆင့်မြင့်ရဲနှင့်သာ တိုင်ချင်သည်ဟုပြောသဖြင့် ဦးစိုးမင်း၊ ဦးထွန်းထွန်း၊ ကိုဇော်မျိုးအောင်တို့နှင့်အတူ တိုင်းရုံးသို့သွားရောက်တိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်ဟု အစစ်ဆေးခံခဲ့ ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အမှုမှန်အတိုင်းထွက်ဆိုခဲ့သဖြင့် စန်းမောင်အပါအ၀င် ၎င်း၏ညီအစ်ကို မောင်နှမ ဆွေးမျိုး တစ်စု တို့မှ မတရားအငြှိုးထားကာ ၎င်းမှ မင်းတို့မိသားစုတွေ အကုန်လုံး ထောင်ထဲရောက်အောင်ပို့ပစ်မယ် မူးယစ် ဆေး ထည့်ဖမ်းမယ်၊ လူမိုက်တွေနဲ့ရိုက်မယ် စသည်ဖြင့် နည်းလမ်းပေါင်းစုံသုံး၍တိုက်ခိုက်မည် မင်းတို့တွေ ထမင်းဝအောင် စားထားဟု နေရာအနှံ့ လိုက်လံခြိမ်းခြောက်နေခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ ကျွန်တော် ဦးထွန်းထွန်း ဦးအောင်သာ ဦးစိုးမင်းနှင့် နစ်နာသူ ရဲမင်းနှင့် အထက်ပါ လူအားလုံး၏မိသားစုများ အန္တရာယ်ချောက်ထဲသို့ အချိန်မရွေးကျရောက်သွားနိုင် သည်။ ကျွန်တော်တို့ အလုပ်လုပ်နေသော၂၂-လမ်းတွင် ငှားရမ်းထားသောအခန်းကို လမစေ့မှီ ရယကနှင့်တကွ တရားဝင်အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့အပ်နှံရခြင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့မရှိခိုက်အချိန်တွင် ဥပဒေမကင်းသောပစ္စည်း ထည့်ထားမည် စိုးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်နှင့် ဖခင် ဦးအောင်သာ ဦးလေး ဦးထွန်းထွန်းတို့ကို ကလေး တမူး မှ လူ ကယ်ရီသယ်သည်ဟု (စစစ) အက်စ်ဘီ၊ ခရိုင်ရဲတိုင်းရဲနှင့်ဋ္ဌာနပေါင်းစုံသို့ မဟုတ်မမှန်လိမ်လည် တိုင် ကြားခဲ့ပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ ကျွန်တော်နှင့် မိသားစုဝင်ရှစ်ဦးသည် ၎င်း၏လုပ်ကြံမှုကိုကြောက်၍ အိုးအိမ်စီးပွားကိုပစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့သို့ တိမ်းရှောင်နေခဲ့ပါသည်။ မင်းတို့မိသားစု မန္တလေးမှာတွေ့လျှင် သတ်ပစ်မယ် ထောင်ထဲထည့်ပစ်မယ် ဟု ဖုန်းနဲ့ဆက်၍ ခြိမ်းခြောက်ခံခဲ့ရပါသည်။ ၎င်းတို့လို ကုလားတိုင်းမှူး အထက်လည်းပိုင် အောက်လည်းပိုင် အလယ်လည်းပိုင်၊ လူမိုက်တွေနှင့်အတူနေ နယ်မြေခံရဲတွေလည်းပိုင်၊ လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ဖြစ်နေသော လူတွေကို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းကြောက်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ကိုကြောက်သဖြင့် မန္တလေးတိုင်း ဌာနပေါင်းစုံကို တိုင်စာများ ပို့ခဲ့သော်လည်း မည်သည့်ဌာနမှ စစ်ဆေးအရေးယူခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကျွန်တော် ဇော်မျိုးအောင် ဖခင် ဦးအောင်သာ၊ ဦးလေး ဦးထွန်းထွန်းတို့မှ ကလေး တမူး ဘက်မှလူများကို လူကုန်ကူးတားဆီးရေးအဖွဲ့ စသည့်ဌာနများသို့ တိုင်စာ မဟုတ်မမှန် လိမ်လည်တိုင်းတန်းခဲ့ပါသည်။
တိုင်စာစစ်ဆေးသည့် လူကြီးများထံ တိုင်စာ အစစ်ဆေးခံလိုသော်လည်း နေဝင်း၊ စန်းမောင်နှင့် လူမိုက် တစ်စုတို့၏ ရန်ကိုကြောက်ရသဖြင့် မန္တလေးသို့ မလာရဲ၊ ကျွန်တော်တို့မှာ မဟုတ်သည့်အေကြောင်းကိုလည်း မရှင်းပြနိုင်သဖြင့် ပြစ်မှုကြီးမှာလည်း စိုးရိမ်ရ၊ ကျွန်တာ်၏ဖုန်းကို စန်းမောင်မှာ ညတိုင်းဆက်၍ မင်းတို့မိသားစုကို ငါတို့ လာဖမ်းတော့မယ် ဟေ့ကောင် ငါ့ကျွန်ကိုကယ်ချင်ဦး မင်းတို့ထောင်နန်စံဖို့သာပြင်တော့ ဟု နေ့စဉ် ခြိမ်းခြောက်နေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့မှာလည်း ရန်ကုန်မှာ နေနေရတာ နေဝင်း၊ စန်မောင်တို့၏ လုပ်ကြံမှုကို စိုးရိမ် နေရသည်မှာ နေ့စဉ်နှင့် အမျှ ဖြစ်ပါသည်။
လူတစ်ယောက်ကိုကယ်ခဲ့မိတာ ဒုက္ခပေါင်းသောင်းခြောက်ထောင်မက ရင်ဆိုင်နေရတာမတန်ပါဘူး။ ဤသို့ ဖြင့် ကျွန်တော်တို့ မတရားအတိုင်ခံနေရသောအမှုကို နေပြည်တော် (စစစ) ညွန်မှူးထံစာတင်၍ လူကြီးမင်း ကျွန် တော်တို့လည်း နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့၏ရန်ကိုကြောက်၍ မန္တလေးတွင်မဖြေရှင်းလိုဘဲ ရန်ကုန်တွင်သာ အစစ်ဆေး ခံချင်ပါသည်ဟု ဖြေရှင်းစာပို့၍ ဖြေရှင်းခဲ့ရပါသည်။ ဤသို့ ရန်ကုန်တွင် ကျွန်တော်တို့၏ မိသားစု ၈ ယောက် နေထိုင် ရာမှ ညီ၏မိန်းမဖြစ်သူ ရန်ကုန်တွင်မနေနိုင်ဟု ပြောပြီးပြန်သွားရာ ၎င်း၏ အိမ်ထောင်ပျက်သွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁ လပိုင်းတွင် ကျွန်တော်နှင့် ရန်ကုန်တွင်အတူနေထိုင်သော ရဲမင်း၏ အစ်ကိုတော်စပ်သူ ထွန်းလင်းဆိုသူ ရောက်ရှိ လာပြီး ၎င်းသည် သာစည်မှာနေကြောင်း ၎င်း၏ညီကိုတွေ့ချင်၍ လာရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၎င်း၏ညီ ရဲမင်းကို ခဏခေါ် သွားပြီး ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးချင်ကြောင်း ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်မှ ၎င်းတို့သုံးဖို့ငွေ ၃၀၀၀၀ိ တိတိကို ထည့်ပေးလိုက် သည်။ ထိုနေ့ည ၈း၀၀ နာရီကျော်ထိ ရဲမင်းအားပြန်လာမပို့သဖြင့် ကျွန်တော်မှ စိုးရိမ်၍လိုက်လံစုံစမ်းရာ ထိုနေ့ည ရထားဖြင့် မန္တလေးသို့ ပြန်ခေါ်သွားသည် ဟု သိရပါသည်။
မန္တလေးရောက်တော့ စန်းမောင်မှ လာကြိုပြီး ရဲမင်း၊ ရဲမင်းအစ်ကိုနှင့် မိန်းမတို့ကို ၂၈ လမ်း x ၈၂ လမ်း ထောင့်ရှိ ဘိုနန်ဇာ ဟော်တယ်တွင်ထားပြီး ရဲမင်းစွဲဆိုထားသော အမှုအတွက် ကြေအေးပေးရန် ငွေပေးပြီး ချမ်းအေး ရယက ရုံးတွင် လက်မှတ်ထိုးပေးခဲ့ပါသည်။
နောက်တစ်နေ့တွင် ရဲမင်းအား တရားရုံးသို့ လိမ်လည်ခေါ်သွားပြီး ရုံးရောက်ရင် မင်းက ငါခိုင်းတဲ့အတိုင်း လုပ် မင်းအစ်ကို ကိုပါငွေပေးထားတယ်။ မလုပ်ရင်မင်းကိုဖမ်းမယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သဖြင့် ရဲမင်းမှ ရုံးရောက်ပြီး တရားသူကြီးရှေ့တွင် ဦးထွန်းထွန်း၊ ဦးဇော်မျိုးအောင်တို့မှခိုင်းသဖြင့် တိုင်ရကြောင်း ကျွန်တော်ရဲမင်းသည် အမှုမှ ရုတ်သိမ်းခွင့်ပြုပေးပါ ဟု ရုံးတော်တွင်စာတင်ခဲ့ကြောင်း ရဲမင်းပြန်လည်၍ ရန်ကုန်သို့ ထွက်ပြေရောက်ရှိသော အခါမှ သာ အဖြစ်အပျက်ကို သိခဲရပါသည်။
ဤနည်းဖြင့် တရားခံစန်းမောင် အမှုမှ ကွင်းလုံးကျွတ် လွတ်မြောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရဲမင်း၏အသက် (၁၅)နှစ်မှ (၁၈)နှစ်သို့ လိမ်လည်၊ လက်ခံထားသူတွေက မတရားလိမ်လည်သည်ဟု ကလိမ်ကကျစ်ဖြင့် တရားခံ စန်းမောင်၏ ဆောင်ရွက်မှု မအောင်မြင်ခဲ့လျှင် တရားခံစန်းမောင်သည် ကလေးသူငယ် ညှဉ်းပန်းနှိက်မှု လူရောင်း လူဝယ်လုပ်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ကြီးချခံရမည်မှာ သေချာပေါက်ဖြစ်ပါသည်။
ဤသို့ဖြင့် ကျွန်တော်သည် ရန်ကုန်တွင်နေလာခဲ့ရာ ၄ နှစ်ခန့်ရှိသွားပြီဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်၏အိမ်ထောင် သက် ၁၂ နှစ်မှာ သမီးတစ်ယောက်၊ ၁၃ နှစ်မှာ သမီးတစ်ယောက် ရရှိခဲ့ကာ ရန်ကုန်ရောက်တော့ လူဦးရေတိုးပွား ခဲ့ပါသည်။ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသော ရဲမင်းလည်း ကျွန်တော်နှင့် ယခုထက်ထိ အတူတကွ ရှိနေဆဲ ဖြစ်ပါသည်။
ထိုသို့ မိသားစုဘဝပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းလာရင်း ယခုနှစ်သင်္ကြန်ကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဆိုင်တွေပိတ်ရ ပါသည်။ ကျွန်တော်၏ဆိုင်က ရွှေထိပ်တန်း ကြွေပြားဆိုင်၊ စော်ဘွားကြီးကုန်း၊ အင်စိန် ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ကြန် အစိုးရ ရုံးပိတ်ရက်ဖြစ်သောကြောင့် ကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာ မန္တလေးတိုင်း၊ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ဦးလေး၏ဇနီး၊ သမီးနှစ် ယောက်နှင့်အတူ လာရှိုး၊ မူဆယ်၊ ရွှေလီမြို့သို့ (၁၂-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ရာ (၁၉-၄-၂၀၁၂) နံနက် ၄ နာရီခန့်တွင် အမရပူရမြို့သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး ကျွန်တော်တို့ မိသားစုသဖွယ် ရင်းနှီးသော ဦးလေးထွန်းထွန်းမှ ဆွမ်းချိုင့်ပို့ပေးနေသော ဥက္ကဋ္ဌဆရာတော်ထံ သွားရောက်နှုတ်ဆက်ပြီး တရုတ်ပြည်မှဝယ်လာ သော လှူဖွယ်ပစ္စည်းများကိုလှူဒါန်းရာ ဆရာတော်မှ တစ်ညလုံးကားမောင်းရတာ ပင်ပန်းတယ်၊ ကလေးငယ် တွေ လည်းပါတယ်၊ ဆရာတော်ကျောင်းမှာ တစ်နေကုန်းနားပြီး ရန်ကုန်သို့ခရီးဆက်ဖို့ ပြောသဖြင့် ကျွန်တော်၊ မိခင်၊ ဇနီး၊ ညီမ၊ သမီးနှစ်ယောက် စုစုပေါင်း ၅ ယောက်သည် ဆင်ဖြူမယ်ဆရာတော၏ကျောင်းတွင် တစ်နေကုန် နားခိုပြီး မှ ညနေ ၄ နာရီကျော် ၅ နာရီမှ ရန်ကုန်သို့ ပြန်ခဲ့ကြပါသည်။
ဤကဲ့သို့ ပြန်သွားကြသော ကျွန်တော်တို့မိသားစုကို နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့က မန္တလေးမြို့တွင် ရှိနေသည် ဟု ထင်ကာ ၎င်း၏တူမ မဇာခြည်အောင်ကို ကျွန်တော်ဇော်မျိုးအောင်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူ ဒေါ်ခင်မမတို့မှ ၂၂ လမ်း ၈၂ လမ်းထောင့် နေ့နှစ်နာရီတွင် ကားပေါ်မှ ဆင်းကာ ပါးရိုက်ကြောင်း ဆဲဆိုကြောင်း ကျွန်တော်မှ ခြေထောက်နှင့် ကန်သဖြင့် ဆီးပုံးအောင့်သွားကြောင်းတိုင်းကြားရာ (၂၀-၄-၂၀၁၂) ရက်နေ့တွင် အမှတ် ၅ ရဲစခန်းမှူးထံ အမှု ဖွင့်စေခဲ့ပါသည်။
စခန်းမှူးကလည်း နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့နှင့် ရင်နီးသော အမှုစစ် ဒုရဲအုပ်ညီညီအား စစ်ဆေးစေခဲ့ပါသည်။ ဤနည်းဖြင့် ကျွန်တော်နှင့် မိခင်ရောဂါသည် ဒေါ်ခင်မမတို့မှာ တရားခံဘဝသို့ ရောက်ခဲ့ရပါသည်။ (၂၄-၅-၂၀၁၂) ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် ကျွန်တော်နှင့် မိခင် ဒေါ်ခင်မမတို့မှာ အမှတ် ၅ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက် အစစ်ဆေး ခံခဲ့ရပါသည်။ စခန်းသွားရာ လမ်းတစ်လျှောက်တွင် နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့၏ အန္တရာယ်ကို ကြောက်သဖြင့် ဆင်ဖြူ မယ်ကျောင်းတိုက်မှ သံဃာသုံးပါး၊ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်ဆရာတော် ဦးဝီရသူထံမှ သံဃာသုံးပါး၏ အကူအညီဖြင့် စစ်ဆေးခံခဲ့ရာ နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့သည် ကျွန်တော်တို့ သားအမိ အမှတ် ၅ ရဲစခန်းတွင် အစစ်ဆေးခံရသည်ကို ဘယ်က သတင်းရသည်မသိ အမှတ် ၅ ရဲစခန်းတည့်တည့် လမ်းသွယ်မှနေ၍ ၎င်းတို့ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်နှင့် လူမိုက်တစ်စုသည် ကားအမှတ် (ဘ/........) ပေါ်နေ၍ ကြည့်နေကြရာ သံဃာတော်များပါသဖြင့် နောက်ဆုတ် သွားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သံဃာတော်များမပါလားလျှင် ကျွန်တော်တို့ သားအမိနှစ်ယောက်ဘဝမှာ မတွေဝံ့ပါဘူးဗျာ။ ဆရာတော်တွေကလည်း နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့၏ မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်မှုတွေက ကြောက်စရာအလွန်ကောင်းသော ကြောင့် သံဃာတွေ၏ အစောင့်အရှောက်ဖြင့် သွားလာရန်သာ ညွန်ကြားထားသည်မှာ ကျေးဇူးကြီးမားလှပါသည်။
နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့ကလည်း မဇာခြည်အောင်၏ အမှုအတွက်လိုအပ်သောသက်သေကို နေဝင်း၊ စန်း မောင်တို့၏ မိခင်၏နောက်အိမ်ထောင်မှ မွေးသေားသမီး အသဲ (ခ) သန်းသန်းအေးနှင့် ၎င်း၏ယောကျာ်း အောင်ပု တို့ကို သက်သေထွက်ဆိုခိုင်းခဲ့ပါသည်။ အမှုစစ် ဒုရဲအုပ်ညီညီမှလည်း အမှုကို ခိုက်မာစွာစစ်ဆေးခြင်း၊ လွတ်လပ် သော ပတ်ဝန်းကျင်ကို စစ်ဆေးခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင်မှ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသော စစ်ဆေးချက်များကို ဥပဒေသို့ တင်ပြ ခြင်းမရှိခဲ့ဘဲ ကြီးသောအမှုကို ငယ်အောင်မစုံစမ်း၊ ငယ်သည့်အမှုကို ကြီးအောင်းချဲ့ရေးကာ ပုဒ်မ (၃၅၄၊ ၂၉၄၊ ၃၂၃) ဖြင့် အရေးယူခဲ့ပါသည်။ တိုင်ကြားသူ စွပ်စွဲသော (၂၂x ၈၂) လမ်းထောင့် မပြောနဲ့ မန္တလေးမြို့ကိုတောင် မရောက်ဘဲ မရှိတဲ့လူကို အမှုဆင်ခံခဲ့ရပါသည်။
ပြစ်မှုဥပဒေ ပုဒ်မ ( ) ဖြင့် တွဲဖက်မြို့နယ်တရားသူကြီး ဦးဌေးအာင်၏ ခုံရုံး၌ အမှုရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ရုံးတော်သို့လည်း ၂၁-၆-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် အမှုတင်ခဲ့ပါသည် ဆင်ဖြူမယ်ကျောင်းတိုက်မှ ဥက္ကဋ္ဌ ဆရာတော် ဦးအဂ္ဂဉာဏ အပါအဝင် ဆရာတော် သံဃာတော် ၁၁ ပါး လက်မှတ်ထိုးဖြင့် ဒကာဇော်မျိုးအောင်နှင့် ဒကာမကြီး ဒေါ်ခင်မမ တို့သည် အခင်းဖြစ်ပွားသည်ဟု ပြောသောနေ့ရက် အချိန်တွင် မန္တလေးမြို့တွင် မရှိဘဲ အမရပူရမြို့နယ် ဆင်ဖြူမယ် ကျောင်းတိုက်တွင် ရှိနေပါလျှက်နှင့် မတရားစွပ်စွဲခံရသည့်ကိစ္စကို လိုအပ်သလို စီစစ်ဆောင်ရွက် ပေးပါရန်
(က) ဝန်ကြီးချုပ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့။
(ခ) တိုင်းဒေသကြီး လွတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်။
(ဂ)တိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေချုပ်ရုံး၊ မန္တလေးမြို့။
(ဃ) တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသို့ လိပ်မူ၍ တိုင်ကြားစာ တင်ပြခဲ့ရာ ၂-၇-၂၀၁၂ နေ့တွင် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးမှ စစ်ဆေးခိုင်း၍ ဆရာတော်၏တိုင်စာနဲ့ပတ်သက်၍ စစ်ဆေးရသည်ဟု ဒုရဲအုပ်ညီညီမှ ကျွန်တော်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့ကို စစ်ဆေးပြီးကြောင်း လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပါသည်။ ထိုသို့စစ်ဆေး ရာတွင်လည်း အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်အောင် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ ယခုအချိန်ထိ အမှု ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ကျွန်တော်နှင့် မိခင်ဖြစ်သူတို့မှာ အမှုကို ရန်ကုန်မှလာရောက်၍ ရင်ဆိုင်ဖြေရင်းရသည်မှာ များစွာ ဒုက္ခရောက်ရပါသည်။ အမှုတစ်ခုရင်ဆိုင်ရပြီဆိုလျှင်လည်း သိတဲ့အတိုင်းပင် ငွေကတော့ အထုပ်လိုက်ကုန်နေရပါ သည်။ ပထမရုံးချိန်တွင် ၂၁-၆-၂၀၁၂ ဖြစ်ပြီး တရားခံ ကျွန်တော်တို့သားအမိ လာရောက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယရုံးချိန်း ၂-၇-၂၀၁၂ နေ့တွင် ရန်ကုန်မှလာသော တရားခံသားအမိကသာ ရုံးချိန်းသို့ လာရောက်ခဲ့ပါသည်။ မန္တလေးမှတရား လို မဇာခြည်အောင်က မလာပါ။ တတိယရုံးချိန်းသို့ ၁၂-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်မှလာသောတရားခံသားအမိ မှ မိခင်ဒေါ်ခင်မမသည် ကင်ဆာရောဂါ၊ သွေးတိုး၊ နှလုံး၊ သွေးချို၊ ဆီးချို၊ကျောက်ကပ်၊ လေးဖက်နာ ဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြော စသည် ဆေးကုသမှတ်တမ်း ဆေးစာများနှင့်တကွ တင်ပြခဲ့ရာ ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျင့်ထုံး ဥပဒေ ပုဒ်မ
(၅၄၀) (က) (၁)အရ ရုံးချိန်းကင်းလွတ်ခွင့် ရရှိခဲ့ပါသည်။ ထိုနေ့တွင်လည်း ရန်ကုန်မှ ကျွန်တော်တို့သားအမိသည် တရားရုံးသို့ လာရောက်ခဲ့သော်လည်း မန္တလေးမြို့ ၂၆-၂၇လမ်း၊၈၂-လမ်းထောင့်တွင် ကွမ်းယာထိုင်ရောင်းနေသော တရားလို မဇာခြည်အောင်သည် တရားရုံးသို့ လာရောက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
စတုတ္ထရုံးချိန်း ၂၄-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော်ဇော်မျိုးအောင် ရန်ကုန်မှ ဒုက္ခခံကာ တရားရုံးသို့ လာရောက်ရင်ဆိုင်နေသော်လည်း တရားလိုမဇာခြည်အောင်မှာ ယခင်နည်းတူ ကွင်းယာထိုင်ရောင်းနေရသဖြင့် ရုံးချိန်းသို့ မလာခဲ့ပါ။ နံနက်(၁၀)နာရီမှ ညနေ(၄)နာရီထိ ထိုင်စောင့်ခဲ့ရသည်မှာလည်း ရုံးချိန်းတိုင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။
ပဉ္စမရုံးချိန်း ၇-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင်ကျွန်တော် မန္တလေးရောက်ပြီး တရားရုံးတွင် ရှိနေသော်လည်း ကျွန်တော့်ရှေ့နေကပြောသည် ယနေ့ တရားလို မဇာခြည်အောင်မလာလျှင် ၀ရမ်းတင်မည်ဟု ဇော်မျိုးအောင် လက်မှတ်ထိုးဟု ပြောသဖြင့် လက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရသည်။ တရားလို မဇာခြည်အောင် မလာရောက်ခဲ့ပါ။ တရားသူကြီးမှ ၀ရမ်းကိုလက်ခံထားသော်လည်း ၀ရမ်းတော့မထုတ်ပါ။ ညနေ(၄)နာရီမှ တရားရုံးမှထွက်ခွာခဲ့ပါ သည်။
ဆဋ္ဌမရုံးချိန်း ၁၅-၈-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် ကျွန်တော် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ တရားရုံးသို့ ပုံမှန်အချိန်(၁၀)နာရီ ရောက်ရှိနေပြီး တရားလို မလာသေးပါ။ (၃)နာရီ(၃၀)မိနစ်ခန့်တွင် တရားသူကြီးထံ သွားရောက်ပြီး ရက်ချိန်းယူရာ တရားသူကြီးမှ တရားခံတင်ပြလာသော ၀ရမ်းစာကို အထက်လူကြီးသို့ တင်ပြသောအခါ အထက်လူကြီးက ၀ရမ်းမထုတ်ပါနဲ့ ၎င်း၏စခန်းမှူးနှင့် ဆက်သွယ်ခိုင်းလိုက်သည်။ မည်သည့်အထက်အရာရှိမှန်းတော့မသိပါ။ သို့ဖြစ်ပါ၍ စခန်းမှူးမှလည်း(၁၂)နာရီ ထိုးကတည်းက ရောက်နေကြတယ်။ တရားလို မဇာခြည်အောင်ကို သွားခေါ် ခိုင်းထားတယ်။ (၄)နာရီလောက်အထိ စောင့်ပေးပါဦး သေချာပေါက်လာမည်ဟု တရားသူကြီးက ပြောပါသည်။ စခန်းမှူး လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှ (၃း၄၀)နာရီခန့်တွင် ထလာပြီး နေ၀င်း၊စန်းမောင်နှင့် မဇာခြည်အောင်တို့ လာနေပြီ ခဏစောင့်ပါဦး တဲ့။ (၄)နာရီထိုးပြီ တရားရုံးထဲ အခြားခုံတွေ ပိတ်ပြီ၊အချုပ်ကား ပြန်ပြီ၊(CRO)ဂျစ်ကားမောင်းပြီး ပြန်ပြီ တရားရုံးထဲမှာ ကျွန်တော်နှင့်ရှေ့နေ၊တရားသူကြီး၊စာရေးမနှစ်ယောက်နှင့်၊စခန်းမှူး၊ ဒုရဲအုပ်နှစ်ယောက်မှ လွှဲ၍ ကျန်ခွေးတစ်ကောင် ကြောင်တစ်မြီးမှ မရှိကြတော့ပါ။
ရောက်လာသော်လည်း စလွန်းကား မိုးပြာရောင်(၁ ယ............)ကားကို မတရားမောင်းပြီး တရားရုံးထဲ ဆင်ဝင်အောက်ထိ မောင်းဝင်းသွားပါသည်။ ထွက်လာပါပြီ ကုလားတိုင်းမှူး နေ၀င်း၊ အတွင်းရေးမှူးစန်းမောင်၊ လုပ်ဇာတ်မင်းသမီး ဇာခြည်အောင် နှင့် အမည်မသိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမျိုးသမီးနှစ်ယောက် ပတ်လည် ချိုကြည့်လျှောက်ကြည်နေ၍ ကျွန်တော်နှင့် ရှေ့နေမှာ တရားခွင်သွားရန် အတွက် ထိုလူအုပ်ကြီးကို ကြောက်ကြောက်ရွံရွံဖြင့် ဖြတ်လျှောက်ခဲ့ရပါသည်။
တရားသူကြီဆို သူ့ခုံပေါ်မှာ အဆင်သင့် ဖြစ်နေတာ ကြာပြီ စာရေးမလည်းအတူတူပဲ ဥပဒေအရာရှိ ရောက်လာပြီး ကျွန်တော့ရှေ့နေ အမှုတွဲစာရွက်တွေ ထုတ်ပြပြီး မဇာခြည်းအောင် ထိုင်ခုံပေါ်ထိုင်ရန် ပြင်နေတုန်း နေဝင်းမှ လှမ်းပြောသည်။ ဟေ့ တရားခံ မစုံရင် အစစ်မခံနဲ့ လာပြန်မယ်ဟု အပြင်မှ လှမ်းအော်ပြောသောကြောင့် တရားလို ကျွန်မ အစစ်မခံနိုင်ဘူး တရားခံ ဒေါ်ခင်မမ မပါလို့ဟု ပြောသည်။ တရားသူကြီးက တရားလိုအား ရုံးချိန်း ဆက်တိုက်မလာဘူး တရားလိုရုံးချိန်းမလားသော ရက်များတွင် တရားခံ ဒေါ်ခင်မမ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့် ဥပဒေနှင့် အညီ တင်ပြလာ၍ ရုံးချိန်းကင်းလွတ်ခွင့် ပေးထားရတယ် ၎င်းတုို့ရှေ့နေ ရှိတယ်ဟု ခိုင်လုံစွာ ပြောပြမှသာ လက်လျှော့သွားသည် နေဝင်းနှင့် စန်းမောင် တို့မှ ကျွန်တော်၏ ရှေ့နေကို ဟေ့ကောင် ညွန့်လှိုင် မင်းငါ့အကြောင်း သိတယ်နော် မင်းကို ပြုတ်သွားအောင် ဖြုတ်ပစ်မယ် ဟု ခြိမ်းခြောက်ပါသည် ။ ဥပဒေအရာရှိက တရားလိုအား မေးခွန်း စမေးပြီး ခဏအကြာ စန်းမောင်မှ ဂွင်ဆင်လိုက်ပြီး အပြင်မှ ရှေ့နေ ကိုဖြိုးမင်းမောင် လက်ထဲမှ ဖုန်းကို ယူပြီး ဟေ့ကောင် ဘာလို့ ငါ့ကို ဗွီဒီယိုရိုက်တာလဲဟု ပြဿနာရှာသံကြီး ထွက်ပေါ်လာရာ နေဝင်းမှ ချက်ချင်းပင် တရားခွင်အတွင်းမှာ ရှိတဲ့ မဇာခြည်အောင်ကို ဟေ့ထွက်ခဲ့ ဒီရုံးမှာ အစစ်မခံနိုင်ဘူး ရုံးပြောင်းမယ် ငါတို့ ကို ဓာတ်ပုံတွေရိုက်နေတာ ဟု အကြောင်းပြ လှမ်းခေါ်ရာ မဇာခြည်အောင်မှ ကျွန်မ အစစ်မခံနိုင်ဘူး ပြန်မယ် ဟု ပြောရာ တရားသူကြီး၏ ခွင့်ပြုချက်မရပဲ တရားခွင် အပြင်သို့ ၎င်း၏ ဦးလေး နေဝင်း အာဏာဖြင့် ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါသည်။
တရာသူကြီး သုံးကြိမ်တိုင်တိုင် လှမ်ခေါ်ရာ မရသဖြင့် စခန်းမှူး ရဲအုပ် အောင်မြင် နှင့် ထွက်ခေါ်ခိုင်းရာ စခန်းမှူးကလည်း မဇာခြည်အောင် မရှိတော့ကြောင်း ပြောရာ ဓာတ်ပုံရိုက်သည် ဟု ပြောသော ရှေ့နေလေး၏ ဟမ်းဖုန်းမှာလည်း တရားရုံး၏ ခုံပေါ်တွင် စစ်ဆေးခံရန် ရှိနေရမည်သူမှ မစစ်တတ်ကြောင်း (CRO)ကလည်း ပြန်သွားပြီ ဖြစ်ကြောင်း သို့ဖြစ်ပါ၍ ဖုန်းကို မစစ်ဆေးတော့ပဲ တရားသူကြီးမှ ယနေ့စစ်တာကို ရပ်နားကြောင်း ဆက်လက် မစစ်ဆေးတော့ပဲ ယခုအဖြစ်အပျက်အားလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး အထက်တရားသူကြီးကို တင်ပြရဦးမည်ဖြစ်ကြောင်းစသည်ဖြင့်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းစာရေးနေကြရတရားလိုမဇာခြည်အောင်နှင့် နေဝင်း၊ စန်းမောင်ထပ်ဆင့်မယား စိုးမိနိုင်တို့ အဖွဲ့ ပြန်ရောက်လာပြီး ရုံးချိန်းပေးရန် တောင်းဆိုရာ တရားသူကြီးမှ ဒီအမှုကို မစစ်ဆေးသေးဘူး အထက်ကိုတင်ပြပြီး ဆက်လက်စစ်ဆေးမယ် ရက်ချိန်းကို ပေးပြီး ဆက်လက်ဆင့်ခေါ်ခြင်းများ မပြုသေးကြောင်း ပြောကြားပါသည်။
ညနေ(၄း၃၀)နာရီအချိန်တွင် မှတ်တမ်းတင်မှု ပြီးဆုံးပြီး ဥပဒေအရာရှိ ရှေ့နေ နှစ်ယောက် စခန်းမှူး ဒုရဲအုပ်တို့သည် တရားသူကြီးရေးသော မှတ်တမ်းကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ရုံးဆင်းခဲ့ပါသည်။ ရုံးဆင်းချိန်တွင် ရုံးရှေ့မှ နေဝင်း၊ စန်းမောင်၊ မဇာခြည်အောင်၊နေဝင်း၏ ဇနီး မစိုးမိနိုင် အမည်မသိလူ (ကျား နှစ်ယောက်)၊မနှစ်ယောက် စုစုပေါင်း (၈) ယောက်သည် ကျွန်တော်နှင့် ရှေ့နေများကို ရန်မူရန် ပုဆိုးထဘီတိုတိုဝတ်၍ စောင့်ဆိုင်းနေကြောင်း အနီးရှိ ဒုရဲအုပ်များ၏ အကူအညီးဖြင့် ကားအနားသွားရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ရဲများလုံခြုံရေးပေးရတာလဲဟု နေဝင်းမှ ဆက်လက်ရန်ရှာပြီး ကျွန်တော်၏ ရှေ့နေကို လက်ညိုးထိုး၍ ပြဿနာဖြစ်အောင် ဖန်တီးနေပါသည်။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ ဆရာတော်ဘုရား ထည့်ပေးလိုက်သော သံဃာတော် (၅)ပါးအား အပြင်ဘက်လမ်းပေါ်ရှိ ကားအနားမှာ စောင့်နေသဖြင့် နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့၏ အကြံအစည် မအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းတို့၏ အကြံအစီကား နေဝင်း၏ ထပ်ဆင့်မယား စိုးမိနိုင်က အဝတ်စလှစ် ချွတ်ချပြီး ကျွန်တော်မှ ကျူးလွန်ကြောင်း ၊ လက်ဝတ်လက်စားများကိုလည်း လုယူကြောင်း သက်သေကိုလည်း ၎င်းတို့ခေါ်လာသော အမည်မသိ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကျား ၂ ယောက် မ ၂ ယောက် ကို စည်းရုံးပြီး ကျွန်တော့ကို ထောင်ထဲ ထည့်ရန် ကြံစည်ထားကြသည်။
တရားသူကြီးသည် .၁၆.၈.၂၀၁၂.ရက်နေတွင် အမှု့တွဲနှင့် မှတ်တမ်းကို အထက်က တရားရုံးသို့တင်ပြမည်။ တရားခံ ဇော်မျိုးအောင်မှ .၂၉.၈.၂၀၁၂.ရက်နေ့ ရုံးချိန်းလာရန် ချိန်းဆိုလိုက်ပြီး ဒီ.၁၆.၈.၂၀၁၂.နှင့် .၂၉.၈.၂၀၁၂.အကြားတွင် ကျွန်တော်၏ မိခင် ဒေါ်ခင်မမ၏ အမည်ဖြင့် ရုံးချိန်းမှန်မှန် မတက်သော စန်းမောင်တို့ အဖွဲ့ကို အရေးယူပေးပါရန် လက်မှတ်ထိုးအတုဖြင့် တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ၎င်းတို့ စာအတုကြောင့် ကျွန်တော်၏ မိခင်မှ .၂၉.၈.၂၀၁၂.ရက်နေ့ ရုံးချိန်းသို့ လာရောက်ရပြီး ဒေါ်ခင်မမ မှ မတိုင်ကြောင်း မိမိရောဂါဆိုးလို့ ရန်ကုန်တိုင် ဆေးကုနေရကြောင်း စာတင်၍ တရားသူကြီးကို ပြောပြီး ရုံးချိန်းကင်းလွတ်ခွင့်ကို တင်ပြတောင်းဆိုကာ တရားသူကြီးမှ အမှုတွဲမရှိကြောင်း ဒေါ်ခင်မမ ၁၂.၉.၂၀၁၂-ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဆက်လက်လာရန်သာ ညွှန်ကြားခဲ့ပါသည်။ နေဝင်း၊ စန်းမောင်၊ မဇာခြည်အောင်တို့၏ တရားရုံး၌ ထင်ရာစိုင်း လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်ခဲ့သော (၂၅.၈.၂၀၁၂)အဖြစ်အပျက်မှတ်တမ်းကို အထက်သို့ တင်ပြထားရာ အထက်မှလည်း ၎င်းတို့ကျူးလွန်သော တရားရုံးမထေမဲ့မြင် အမှုကို ဘာမှ မလုပ်ရဲသေးပါ။
(အင်မတန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းတွဲကြီးပါ။ နေဝင်း၊ စန်းမောင် ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက်က ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအာဃာတနဲ့ လုပ်ကြံအမှုဆင်တာကို ရဲကကြံရာပါဖြစ်ပြီး တရားသူကြီးက အမှုသည်ကို ပြန်ကြောက်နေရတဲ့ သနားစရားသတ္တဝါကြီးဖြစ်နေတာပါ။ ဗမာဆိုရင် နိုင်ငံရေးသမားတောင်မရှောင် ချက်ချင်းလက်ထိပ်ခတ်ကြသည့် တရားရုံးကို စော်ကားမှုကြီးမှာ တရားသူကြီးကလည်း အရေးမယူရဲ ရှေ့နေကလည်း အမှုမဖွင့်ရဲ။ ကုလားအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အမှုမှာ ရဟန်းသံဃာများက ရုံးထွက်နေ့တိုင်း လိုက်လံစောင့်ရှောက်ပေးနေရတဲ့ တကယ့်ဖြစ်ရပ်ပါ။ နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့က ရဲ၊ တရားသူကြီးတို့နှင့်ပေါင်းပြီး နောက်ထပ်ပြဿနာရှာ အမှုဖန်တီးပြီး မတရားစွပ်စွဲမှာကိုကြောက်လို့ သံဃာတွေကို ဇော်မျိုးအောင်က အကူအညီတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။) ဝီရသူ(မစိုးရိမ်)
အထက်ကို (16.8.2012) ရက်နေ့က တင်ပြထားသောအမှုတွဲဆိုသည်မှာ နေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့မှ ရှေ့နေအားဂုတ်ဆွဲခြင်း၊ ဆဲဆိုခြင်း (မင်းမဲ့စရိုက်ဆန်လွန်းတယ်) စစ်ဆေးရာ တရားခွင်တွင်း ထိုင်ခုံ၌ထိုင်နေသော ကြိုးဆွဲရုပ် တရားသူကြီး ဦးဌေးအောင်အား ၎င်းတို့၏ မျက်စိထဲမရှိဘဲ နေဝင်းမှ ဟိတ်.. ဇာခြည်အောင် တရားခံမစုံရင် အစစ်မခံနဲ့ ထွက်လာခဲ့စမ်းဟု လှမ်းခေါ်ခြင်း (တရားရေးရာ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်လွန်းတယ်) အထက်တန်းရှေ့နေ ကိုဖြိုးမင်းကျော်မှ ၎င်းတို့ကို ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဟု စွပ်စွဲပြီး အစစ်ဆေးခံနေသော လုပ်ဇာတ်မင်းသမီး ဇာခြည်အောင်ကို နေဝင်းက ထွက်လာခဲ့စမ်း အစစ်ဆေးမခံနဲ့ ပြန်မယ်လို့ပြောပြီး ခေါ်သွားတယ်။ လုပ်ဇာတ်မင်းသမီးလည်း ထလိုက်သွားတယ်။ ကြိုးဆွဲရုပ် ဦးဌေးအောင် တားလို့တောင်မရလို့ ရှေ့တွင်ရှိသော အမှတ် (၅) စခန်းမှူး ရဲအုပ်အောင်မင်းနှင့် လိုက်ခေါ်ခိုင်းတာ စခန်းမှူးကလည်း မရှိတော့ဘူးတဲ့။ (တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင်လွန်းတယ်)
တရားသူကြီးမှ အထက်ပါဖြစ်စဉ်ကို အောက်ပါအတိုင်း မှတ်တမ်းတင်တယ်။
အမှုခေါ် (၁း၃၀)နာရီ အချိန် တရားလိုနှင့် သက်သေများမလားဘဲ ညနေ (၄း၀၀)မှ တရားလိုလာခြင်းဖြစ်သည်။ စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် ခေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် တရားခွင်ရှေ့သို့ တရားလို၏ ဦးလေး ကိုနေဝင်း၊ ကိုစန်းမောင်တို့ပါ ပါလာသောကြောင့် အမှုမစစ်ဆေးမှီ ဒု ရဲအုပ်စံဝေနှင့် စခန်းမှူးအား လုံခြုံရေးရယူစေ၏။ ဒု မြို့နယ် ဥပဒေအရာရှိ ဦးဝင်းဖြိုး ရှိ တရားခံဇော်မျိုးအောင် ရုံးခံဝင်ဖြင့်ရှိ တရားခံ ဒေါ်ခင်မမ ရုံးခွင့်ပြုချက်ဖြင့် မလာ။ ၎င်းတရားခံတို့ အကျိုးဆောင် ဦးညွန့်လှိုင် ဒေါ်မေဖြူဦး ရှိ တရားလို ဇာခြည်အောင် ရှိ ၎င်းက တရားခံမစုံသဖြင့် အစစ်မခံနိုင်ကြောင်း ပြောသလို တရားခွင်ရှေ့ရှိ ကိုနေဝင်း၊ စန်းမောင်တို့ကလည်း တရားခံမစုံတဲ့ကိစ္စကို အကြောင်ပြ အစစ်မခံရန် အော်ပြောနေသဖြင့် လုံခြုံရေး ရဲအား ဝင်ရောက်မပြောရန် တားမြစ်ရန် ညွန်ကြားကာ တရားလိုအား (12.7.2012) ရုံးချိန်နေ့ သင်တို့ သက်သေခံလာရန် အတည်ဖြစ်သော်လည်းမလာ ပျက်ကွက်စဉ်က တရားခံ ဒေါ်ခင်မမနေမကောင်းသဖြင့် ရုံးချိန် လာရောက်ခွင့်ပြုရန် ပြစ်မှုဆိုင်ရာ ကျင့်ထုံးဥပဒေပုဒ်မ (၂၀၅)အရ လျှောက်ထားသောကြောင့် နည်းလမ်းတကျ ကြားနာကာ ရုံးသို့လာရန် ကင်းလွတ်ခွင့်ပြုတာဖြစ်ကြောင်း ၎င်းအကျိုးဆောင်လည်း ရှိနေ၍ဖြစ်ကြောင်း ထိုစဉ်က သင်တို့ မလာသဖြင့် တင်ပြရန် အခွင့်မရခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောပြ နားလည်စေရာ လက်ခံသဖြင့် ကတိသစ္စာပြုစေပြီး တရားလိုဇာခြည်အောင်ကို စစ်ဆေးခဲ့စဉ် စာကြောင်းရေ (၅)ကြောင်းသာ အရောက် ပြင်ပတွင်ရှိနေသော ကိုနေဝင်း၊ ကိုစန်းမောင်တို့က ပြင်ပထိုင်ခုံတွင် ထိုင်နေသော ရှေ့နေငယ်တစ်ဦးအား ၎င်းတို့ကို ဗွီဒီယို ရိုက်သည်ဟုဆိုကာ တွန်းဆွဲခြင်းပြဿနာဖြစ်လာ၍ လုံခြုံရေး ရဲအရာရှိအား ပြင်ပတွင် ဖြေရှင်းစေရန် ညွန်ကြားသော်လည်း ၎င်းတို့နှစ်ဦးက တရားခွင်အတွင်းရှိနေသော တရားလိုကို ဆက်လက်အစစ်ဆေးမခံရန်ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်က ယခုပြဿနာသည် တရားခွင်ပြင်ပတွင်ဖြစ်သော ပြဿနာဖြစ်ကြောင်း တရားရုံးဝန်ထမ်းများနှင့် မပတ်သက်သလို တရားခွင်တွင်ဖြစ်သောပြဿနာမဟုတ်၍ ဆက်လက်စစ်ဆေးမည်။ တရားခွင်မှ မထွက်ရန်တားမြစ်သော်လည်း တရားလိုသည် ၎င်းဦးလေးနှစ်ဦးနှင့်အတူ ထွက်သွားသဖြင့် စခန်းမှူးအား ထပ်မံခေါ်ယူစေသော်လည်း။ တရားရုံးပြင်ပ ထွက်သွားပြီဖြစ်ကြောင်း အထက်ပါကိစ္စကို သက်သေထွက်ချက်ပေါ်တွင် ကျွန်ုပ်မှ နှုတ်တိုက်ပြောဆိုရေးသားကာ တရားခွင်တွင်ရှိနေကြသော ဒုမြို့နယ် ဥပဒေအရာရှိ ဦးဝင်းဖြိုး အထက်တန်းရှေ့နေ ဦညွန့်လှိုင် ဒေါ်မေဖြူဦး ရဲအုပ်စခန်းမှူးအောင်မြင့် ဒုရဲအုပ် စံဝေတို့အား ဖတ်ပြကာ နုတ်ပယ် / ဖြည့်စွက်ရန်ရှိက တင်ပြရန် ဖိတ်ခေါ် ဖြည့်စွက်ရေးသားကာ အသီးသီးလက်မှတ်ရေးထိုးကြသည်။
ယင်းကိစ္စဆောင်ရွက်စဉ် တရားလိုသည် တရားခွင်ထဲသို့ ၎င်းသဘောဖြင့်ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာကာ ရုံးချိန်းပေးရန်ပြောသောကြောင့် သင်တို့သည်မိမိသဘောဖြင့် တရားခွင်မှထွက်ခွါသွားသဖြင့် အမှုစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်း ရပ်တန့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မရ ဖြစ်ခဲ့ရပါသဖြင့် မှတ်တမ်းတင်နေကြောင်း ယင်းကိစ္စကို အထက်သို့တင်ပြရန်ဖြစ်ပြီး ရုံးချိန်ပေးမည်ဖြစ်သော်လည်း စစ်ဆေးရန်ချိန်းဆိုမည်မဟုတ်သေးကြောင်း ပြောဆိုသည်။
တရားခံများလာရန် …………. ချိန်………………. ၂၉/၈ ရက်ချိန်းသတိပေးပြီး
၁။ မှတ်တမ်းတင်ချိန် ညနေ (၄း၃၀) နာရီပြီးဆုံးပြီး ၂၉-၈-၂၀၁၂- ရက်ချိန်းပေးပြီး ရုံးဆင်းခဲ့ပါသည်။ ဇော်မျိုးအောင်ရှေ့နေတို့မှာ ၎င်းတို့၏ ကားရှိရာသို့သွားရာ စန်းမောင်နှင့် နေဝင်းတို့အဖွဲ့ရောက်ရှိလာပြီး ဟိတ်ကောင်.. လူလိမ်ရှေ့နေ မင်းနှင့် မင်းတပည့်တွေ သတိထားနေ စသည်ဖြင့် ရန်ရှာနေသောကြောင့် ဇော်မျိုးအောင်တို့နှင့်အတူ လိုက်ပါလာသော သံဃာတော် ၅ပါးမှ ၂ပါးက ရှေ့နေအဖွဲနှင့် အဖော်အဖြစ်စောင့်ရှောက်လိုက်ပါပေးပို့ခဲ့ရသည်။ ထိုသို့လိုက်ပို့သော သံဃာများကို နေဝင်းနှင့် စန်းမောင်တို့က အဲဒီဘုန်းကြီးတွေ (လီးဘဲ)လို့ ဆဲရဲတိုင်းထွာခဲ့ပါသည်။ ငွေပေးရင် အဲလိုကောင်တွေကို ခေါ်လို့ရတယ်တဲ့။ ဇာခြည်အောင်ကလည်း ဒီလိုကတုံးတွေ သူဟာကြားထဲမညပ်ဘူးလို့ ခိုင်နှိုင်းခဲ့သေးတယ် သံဃာတော်တွေက သီးခံပြီး ပြန်လာခဲ့ကြပါသည်။ ငါတို့ ကုလားညီနောင်အဖွဲ့ကို ဘယ်သူကမှ မယှဉ်နိုင်ဘူး လာရင်ထောင်ထဲပို့ပစ်မယ်။ ၂၇×၈၂ လမ်းထောင့်က (နေကဖေး) နေဝင်း ၂၈×၈၂ လမ်ထောင့် စန်းကဖေး စန်းမောင်တို့က အထက်ပါအတိုင်း ကျိန်းဝါးသွားတယ်။
အထက်ပါမှတ်တမ်းနှင့် အမှုတွဲကို ၂၄-၈-၂၀၁၂ နေ့တွင် ဒုခရိုင် တရားသူကြီးထံသို့ တင်ပြပြီး ၂၇-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးခရိုင်တရားရုံးက အမှုတွဲပြန်လည်ပေးပို့သည်။
အထက်ပါမှတ်တမ်းတင် အမှုတွဲကို ၂၇-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတရားလွတ်တော်တင်ပြပြီး ၂၈-၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွတ်တော်မှ အမှုတွဲပြန်လည်ပေးပို့သည်။
နောက်တစ်ခါ ၁၁-၁၀-၂၀၁၂-ရက်နေ့ တွဲဖက်တရားသူကြီး ဦးဌေးအောင်မှ ထိုအမှုတွဲကို အောင်မြောသာစံ မြို့နယ်တရားသူကြီးထံ အောက်ပါအတိုင်း ထပ်မံတင်ပြခဲ့ပါသည်။
ဤအမှုအား ဤအောင်မြေသာစံမြို့နယ်တရားရုံးတွင် ဆက်လက်စစ်ဆေးခြင်းအားဖြင့် အလားတူဖြစ်ပွားနိုင် သောကြောင့် လိုအပ်သလိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်တရားသူကြီးထံသို့ ပေးပို့တင်ပြခဲ့ပါသည်။
ထိုကဲ့သို့ အမှုတွဲကို ခရိုင်တရားရုံးကို နှစ်ကြိမ် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်ကို တစ်ကြိမ်နှင့် အောင်မြေသာစံမြို့နယ်တရားသူကြီးထံတွင် တစ်ကြိမ် စုစုပေါင်းလေးကြိမ် အချိန်နှစ်လခန့်ကြာအောင်တင်ပြသော်လည်း ဘယ်တရားသူကြီးကမှ တရားရုံးတော်ကို မထေမဲ့မြင်မှုနဲ့ ၄င်းတို့သုံးဦးကို အရေးမယူရဲတာ ၄င်းတို့ကို ကြောက်လို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် အမှုမမြောက်လို့လားမသိ။ နေဝင်းစန်းမောင်တို့အဖွဲ့ တရားရုံးတွေ၊ ရဲတွေ ဥပဒေအရာရှိတွေကို ဘယ်လောက်ပိုင်တယ်ဆို ခန့်မှန်း၍မရပါ။ ၄င်းတို့ ကျူးလွန်ခဲ့သော တရားရုံးမထေမဲ့မြင်မှုကို ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ခုံမှ တရားသူကြီးကိုယ်တိုင် အထက်မြို့နယ်တရားရုံး(သို့မဟုတ်) ခရိုင်တရားရုံးထံကျူးလွန်သူများအား ထိရောက်စွာအရေးယူ ပေးပါရန်လို့ တင်ပြရမယ်။ အဲလိုမှ မတင်ပြရဲလို့ကတော့ အထက်တရားရုံးတွေကလည်း ဦးဌေးအောင်ပြောသလို နှာစေးနေသဖြင့် မည်သည့်ညွှန်ကြားချက်မျိုးမှ ပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ။
(၂၄.၁၀.၂၀၁၂)ရက်နေ့တွင် ဇော်မျိုးအောင်နှင့် ဒေါ်ခင်မမတို့ ရုံးချိန်းသွားပါသည်။ တရားသူကြီးဦးဌေးအောင်က အထက်သို့တင်ပြထားသော အမှုတွဲပြန်ကျလာပြီဟု ပြောပါတယ်။ အထက်တရားရုံးတော်တွေ (နှာစေး)နေတယ်တဲ့။ ဘာညွှန်ကြားချက်မှ မပေးပဲ အမှုတွဲကို ဒီအတိုင်းပြန်ချပေးလိုက်တယ်။ ၎င်းအနေဖြင့်လည်း ခရိုင်ကို ဆက်လက်တင်ပြချင်သေးတယ်လို့တောင် ပြောပြီး ၇.၁၁.၂၀၁၂-ရက်နေ့ ရုံးချိန်းပေးလိုက်သည်။ တရားလိုကိုစစ်မှာလားလို့ မေးတော့ တရားသူကြီးက ဆင့်လည်း လာမှာမဟုတ်ဘူး။ ရှေ့နေဦးညွှန့်လှိုင်မှ ဒေါ်ခင်မမ ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရ ရန်ကုန်မှ လာပြီး အမှုရင်ဆိုင်ရန်မလွယ်သဖြင့် ဆေးစာများနှင့်အတူ ကျင့်(၂၀၅)အရ ရုံးချိန်းကင်းလွတ်ခွင့် ပြန်လည်ချပေးရန် တောင်းဆိုရာ ဦးဌေးအောင်မှ ပေးတော့ပေးချင်တယ်။ တစ်ဖက်မှ နေဝင်းတို့အဖွဲ့သည် ဒေါ်ခင်မမ မပါလျှင် ပြဿနာရှာမှာ ကြောက်သဖြင့် ရုံးချိန်းတက်ရန်သာ ညွှန်ပြခဲ့ပါသည်။ ပေးစာ ကမ်းစာနဲ့ မတရားငွေယူထားတဲ့ တရားရေးဝန်ထမ်းတွေ ငယ်ကျိုး ငယ်နာပေါ်မှာ ကြောက်လို့ မတရားတဲ့ ဘက်က လိုက်ပြီး မတရား တရားသူကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။
၂၉.၁၀.၂၀၁၂-ရက်နေ့တွင် အမှုတွဲမှ မှတ်တမ်းများ ကူးရန် ဇော်မျိုးအောင် အောင်မြေသာဇံတရားရုံးသို့ သွားရာ ဦးဌေးအောင် ခုံမှ စာရေးမက အမှုတွဲဒီမှာ မရှိဘူး။ မြို့နယ်တရားသူကြီးထံ အမှုတွဲပို့ထားရတယ်။ အဲ့ဒီမှာသာ ကူးရန်ပြောပါတယ်။ မြို့နယ် တရားသူကြီးထံ အမှုတွဲကူးရန်တင်ပြရာ ဇော်မျိုးအောင်နဲ့ အတူ ဒေါ်မာမာနီလည်း ပါသွားရာ တရားသူကြီးက ဘာကိစ္စတုံးတဲ့။ အမှုတွဲကူးချင်လို့ပြောတော့။ မင်းတို့ ရုံးမပြောင်းဘူးလား။ ဒါနေဝင်းတို့ အပိုင်နယ်မြေဆိုတာ သိလား။ ထပ်မံလုပ်ကြံခံရလိမ့်မယ်။ ဒီမှာ ဆက်စစ်လို့ကတော့ အလကားပဲ။ မင်းတို့ဘဲ ဒုက္ခရောက်မယ်။ ဟိုဘက်ကို မလွန်ဆန်နို်င်လို့ မင်းတို့သားအမိ နှစ်ယောက်ကို ထောင်တစ်နှစ်စီ ချလိုက်လိမ့်မယ်။ ငါတို့လည်း ၎င်းတို့အဖွဲ့ကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ အဲ့ဒီတော့ ရုံးသာ ပြောင်းလိုက်ပါ။ ရုံးပြောင်းချင် ငါတို့ ကူညီပေးမယ်။ ရုံးချိန်းလာတိုင်း လည်း သံဃာတော်တွေက လိုက်စောင့်ရှောက်ပေးနေလို့ မဟုတ်ရင် သူတို့ခွင်ထဲ ထပ်ရောက်သွားလိမ့်မယ်လို့ နှုတ်မှ တိုက်ရိုက်ပြောခဲ့ပါသည်။
(၇.၁၁.၂၀၁၂)-ရက်နေ့တွင် နေဝင်း စန်းမောင်တို့ တရားရုံးကို လာပြီး သောင်းကြမ်းပြန်ပြီ။ သူတို့၏ တူမ တရားလို ဇာခြည်အောင်နှင့် သူတို့၏အမေတူ အဖေကွဲ ညီမအသဲနှင့် ယောက်ဖအောင်ပုတို့ကို ၂၁.၁၁.၂၀၁၂-ရက်နေ့တွင် သုံးယောက်လုံးကို တစ်ပြိုင်နက် စစ်ဆေးပေးပါ။ စစ်ဆေးတဲ့နေ့မှာလည်း ဘယ်ဘုန်းကြီးမှ မပါလာစေနဲ့တဲ့။ တရားသူကြီးလည်း မဖိတ်ပဲ ရောက်လာတဲ့ နေဝင်း စန်းမောင်တို့ကို ကြောက်ပြီး ၎င်းတို့ပြောသည့်နေ့ (၁၁)နာရီ စစ်ဆေးပေးပါမယ်-ဟု ပြောလိုက်တယ်။
(၂၁.၁၁.၂၀၁၂)ရက်နေ့ စွပ်စွဲခံရသူ သားအမိနှစ်ယောက်နှင့် ရှေ့နေများ (၁၀)နာရီတွင် ရုံးရောက်နေပြီး တရားလိုအဖွဲ့ (၁၂)နာရီကျော်မှ ရောက်ရှိလာပြီး
စစ်ဆေးခံပါသည်။ ပြောတုန်းကတော့ သုံးယောက်လုံး အစစ်ခံမယ်လို့ပြောထားပြီး တကယ်စစ်တော့ ဇာခြည်အောင်တစ်ယောက်ပဲ အစစ်ခံတယ်။ အသဲနှင့် အောင်ပု မလာဘူးဟု လိမ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ တကယ်တော့ သက်သေနှစ်ယောက်ဟာ ဆိုင်ကယ်အပ်နှံနေရာနားမှာ ရှိနေပါတယ်။ မဇာခြည်အောင် အစစ်ခံချက်နှင့် လွဲသွားမှာကြောက်လို့နဲ့ တူပါတယ်။ စန်းမောင်က အသဲနှင့်အောင်ပုကို ပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။
အစစ်ဆေးခံနေချိန် အပြန်အလှန်မေးနေချိန်မှာ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော ရောဂါသည် ဒေါ်ခင်မမမှာ တရားခွင်၌ မူးလဲနေပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ ကျန်းမာရေးမကောင်းသော ဒေါ်ခင်မမ၏ အခြေအနေကို တရားသူကြီးကလည်း သိပါသည်။ ရှေ့နေဦးညွှန့်လှိုင်မှ စစ်ဆေးပြီးသောအခါ ကျွန်တော့်အမှုသည်၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေမှာ ဆိုးဝါးလှသောကြောင့် နောက်ရုံးချိန်းတွင် ကင်းလွတ်ခွင့် ပြုရန်တင်ပြရာ တရားသူကြီး ဦးဌေးအောင်မှ ခင်ဗျားတို့ ဒါတွေ လာမပြောနဲ့။ (၅.၁၂.၂၀၁၂)ရက်နေ့ ရုံးချိန်းမပျက်မကွက်လာရန်သာ အမိန့်ချလိုက်ပါတယ်။ တရားလိုကို ရှေ့နေ ဦးညွှန်လှိုင်မှ စစ်ဆေးရာတွင်လည်း တရားသူကြီးက ဟိုလိုမမေးနဲ့ ဒီလိုမမေးနဲ့ ပြဿနာတက်လိမ့်မယ်။ စသည်ဖြင့် စစ်ဆေးခြင်း လွတ်လပ်ခွင့် မရှိပါ။
နေဝင်းနှင့်စန်းမောင်တို့သည် ၎င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးသော စခန်းမှူးရဲအုပ်အောင်မြင့်နှင့်အတူ ပခုံးဘက်ပြီး လက်ဘက်ရည်ဆိုင်သွားလိုက် လမ်းရှောက်လိုက်စသည်ဖြင့် ၎င်းတို့ ရဲကို ပိုင်ကြောင်း ပြနေပါသည်။ ပြင်ပတွင်လည်း နေဝင်းတို့သည် တိုင်းတရားသူကြီး ဦးစိုးသိန်းနှင့် သူ့မိန်းမကို ငါတို့ အပိုင်ပေါင်းထားတယ်။ ဒီသားအမိနှစ်ယောက်ကို ထောင်မကျ ကျအောင် ငါတို့ လုပ်နိုင်တယ်။ မယုံရင် ကြည့်ထား။ ငါတို့ ရန်ငြိုးကို ပြန်ဆပ်ပြမယ်။ တိုင်စာနဲ့ ပက်သတ်လို့လည်း ကြိုက်တဲ့နေရာကို တိုင်။ မန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း ဝန်ကြီးချုပ်က တိုင်စာမဖတ်ဘူး။ တိုင်စာဖတ်တဲ့ ဝန်ကြီးက ငါပိုင်တဲ့ လုံခြုံရေးနဲ့ စည်ပင်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်မိုးက ငါတို့ နာမည်ပါတဲ့တိုင်စာဆိုရင် စစ်ဆေး ရန် အောက်ကို မချပေးဘူးလို့ အပြင်လောကတွင် လူပေါင်းစုံထံ လိုက်လံ ကြွားဝါနေ ကြောင်း ကြားသိနေရပါသည်။
ကျွန်တော်သည် လွန်ခဲ့သော ၄နှစ်ခန့်က မန္တလေးခရိုင် အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ဥပုသ်တော်ရပ်ကွက်၊ အကွက် (၃၂) တွင် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ တစ်နေ့တွင် ကျွန်တော်သည် အစ်မတော်စပ်သူ ဒေါ်ခင်မမနေအိမ်သို့ ညပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသွားရာ ကျွန်တော့်အစ်မ၏ နေအိမ်အပေါ်ထပ်ဝရံတာတွင် ခြင်ထောင်အဖြူကလေးထောင်၍ အထဲတွင် ဘုရားရှိခိုးနေသောကလေးအား တွေရှိသဖြင့် ကျွန်တော်မှ အံဩမိပြီး အစ်မအား မည်သူ မည်ဝါလဲ ဟု မေးရာ အစ်မမှ ကလေးငယ်သည် စန်းမောင် (၎င်း၏သမက်) အိမ်မှဖြစ်ကြောင်း၊ စန်းမောင်မှ ရိုက်နှက် မောင်ထုတ်နေသဖြင့် ၎င်း၏သမီးဖြစ်သူ မဖြူပြာအောင် (စန်းမောင်ဇနီး) မှ လာရောက်အပ်နှံထားကြောင်း ပြောပြ သဖြင့် ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင် သိရပြီး သနားကရုဏာ ဖြစ်၍ စတင်သိရှိခဲ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်၏အစ်မ ဒေါ်ခင်မမနှင့် တူ ဇော်မျိုးအောင်တို့မှာ တစ်အိမ်တည်းတွင် အတူနေကြသူများ ဖြစ်ကြ ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် ဇော်မျိုးအောင်နှင့်အတူ (၂၂)လမ်း ၈၃×၈၄လမ်းကြား တွင် အခန်းငှား၍ ကားဝယ်ရောင်း အတူလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နေ့တွင် ဇော်မျိုးအောင်မှ ရဲမင်းအား ကားဝယ်ရောင်းလုပ်သည့်အခန်းသို့ ခေါ်ဆောင် လာခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ခေါ်ဆောင်လာစဉ် စန်းမောင်မှ မောင်ရဲမင်းအား ကလေးနဲ့မတန်အောင် ရိုက်နှက်ခေါ်ဆောင် သွားကာ ကျန်ရှိလူများကိုလဲ ရိုင်းစိုင်းစွာဆဲဆို ကြိမ်းမောင်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကလေးငယ်အား ကျွန်တော် တို့၏ မျက်စိအောက်တွင် ရိုက်နှက်နေသော်လည်း မည်သို့မျှ မတားဆီးရဲခဲ့ပါ ထိုသို့ ရဲမင်းအား ခေါ်ဆောင်သွားပြီး ရဲမင်းပြန်လည်ထွက်ပြေးလာသောအခါ ရဲမင်းမှ အဆင့်မြင့်ရဲအရာရှိထံ ၎င်းအားအပ်နှံပေးပါရန်နှင့် အမှတ်(၅) အမှတ်(၈) လောက်ဆိုရင် စန်းမောင်မှ အလွန်ပိုင်ကြောင်းပြောသဖြင့် ကျွန်တော် ဦးထွန်းထွန်း၊ ဇော်မျိုးအောင်၊ ဦးစိုးမင်း တို့နှင့်တကွ မန္တလေးတ်ိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့မှုးရုံးသို့ ၎င်းအားပို့ပေးခဲ့ရာ ထိုရုံးတွင် ဒုတိုင်းရဲမင်းကြီးနှင့်တွေ့ပြီး အပ်နှံခဲ့ကြရာ ထိုအမှုတွင် အစိုးဘက်မှ သက်သေလိုက်ခဲ့ရပါသည်။
ထိုသို့ သိသည့်အကြောင်း သက်သေလိုက်ခဲ့မိသည့်အတွက် ယနေ့ထိတိုင်အောင် ဒုက္ခမျိုးစုံနှင့် ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။ ၂၀၀၈၊ ၁၁ လပိုင်းခန့်တွင် စန်းမောင် အာမခံနှင့် လွတ်လာသည့်အချိန်မှစ၍ လူကိုယ်တိုင် အုပ်စုဖွဲ၍၎င်း ဖုန်းများနှင့်၎င်း နည်းမျိုးစုံသုံး၍ ဒုက္ခပေးခြင်များပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ကျောင်းနေအရွယ် သမီးငယ်များ၏ ကျောင်းများသို့လည်း လာရောက်၍ ခြိမ်းခြောက်သည့် အကြည့်မျိုးဖြင့် ကြည့်သည့်အတွက် တစ်နှစ်တည်းမှာပင် ကျောင်း (၃) ကျောင်း ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ လိုက်လံခြိမ်းခြောက်မှုများ တစ်နေ့တစ်ခြား ဆိုးဝါးလာသည့် အတွက် ၂၀၀၉-ခုနှစ်၊ ၄- လပိုင်းလောက်မှစ၍ အိုးအိမ်စည်းစိမ်များကိုစွန့်၍ အမရပူရမြို့နယ်ရှိ ဆင်ဖြူမယ်ကျောင်း ဆရာတော်ထံ သွားရောက် ခိုလှုံခဲ့ပါသည်။
ဆရာတော်၏ စီစဉ်ပေးမှုအရ အမရပူရမြို့၊ ကျန်တန်းရပ်ကွက်မှာပင် နေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့နေထိုင်စဉ် စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲ့သည့်အတွက် မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ဥပုသ်တော်ရပ်ကွက်ရှိ တိုက်တာလေးကို ကာလပေါက်ဈေးထက်လျှော့၍ရောင်းပြီး ရသည့်ငွေဖြင့် အောက်ကားလေးများဝယ်၍ ဝယ်ရောင်း ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကား ပွဲစားတန်းများသို့လည်း နေဝင်းနှင့် စန်းမောင်မှ အုပ်စုဖွဲ့၍ တပည့်များကားဖြင့်တင်ဆောင်လာ၍ လိုက်လံရှာဖွေ နေသဖြင့် မိတ်ဆွေ အပေါင်း အသင်းများမှ ရှောင်နေပါရန် ပြောသည့်အတွက် မည်သည့်နေရာမှ မသွားရဲခဲ့ပါ။
၁၂-၁၂-၂၀၀၉ ရက်နေ့တွင် နယ်ဝေးမှမိတ်ဆွေတစ်ဦးက ကားလိုချင်သည်ဟု ဖုန်းဆက်လာသဖြင့် ဂျွန်းဝင်း ထဲရှိ မိတ်ဆွေထံမှ ကားကို ပြသခဲ့ရာ အရောင်းအဝယ်တည့်သည့်အတွက် ဂျွန်းဝင်းထဲသို့ ည ၇ နာရီ အချိန်ခန့်တွင် ကားပိုင်ရှင်ထံသို့ ကားဖိုးငွေ သွားရောက်ပေးချေရာ နေဝင်း၊ စန်မောင်နှင့် အပေါင်းပါ တစ်စုတို့မှ ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက် ခဲ့သဖြင့် ဆေးရုံတက်ရောက်ခဲ့ရပါသည်။
၂၀၁၁- ခုနှစ်၊ ၈- လပိုင်းတွင် ၁၅ လမ်း၊ ၈၁ လမ်းထောင့်တွင် စန်းမောင်နှင့်တွေ့ရာ ဆဲဆိုကြိ်မ်းမောင်းခြင်း ခံခဲ့ရပါသည်။ ၂၃-၁-၂၀၁၂-နေ့တွင် မန္တလေးမြို့၊ အောင်မြေသာဇံမြို့နယ်၊ ၂၂ လမ်း၊ ၈၂ လမ်းထောင့်တွင် ကားပျက်နေ၍ ဝပ်ရှော့မှ ကလေးများနှင့်ကားပြင်နေစဉ် မသန်းသန်းမြင့်နှင့် မဇာခြည်အောင်တို့ သားအမိ နှစ်ယောက် ရောက်ရှိလာပြီး ရှေ့တစ်ယောက် နောက်တစ်ယောက် ကျွန်တော်၏ အင်္ကျီင်္ီကို ဝ်ိုင်းဆွဲ၍ ရိုက်နှက်နေရာ ကျွန်တော်သည် မည်သို့မျှမတုန့်ပြန်ရဲပါ။ တစ်ချိန်က ဦးစိုးမင်းအားလည်း ထိုနည်းတူစွာပြုလုပ်၍ ဘလက္ကာယ အမှုဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ဖူးသည်ကိုသိသဖြင့် လက်ကိုနောက်ပစ်၍သာ ခံနေခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့၎င်းတို့ရိုက်နှက်နေစဉ် နေဝင်း၊ စန်းမောင်နှင့် အပေါင်းအပါ အုပ်စုလိုက် ၉ ဦးခန့် ရောက်ရှိလာပြီး ထိုးသူထိုး၊ ကန်သူကန်နှင့် မြေပြင်ပေါ်တွင် အလူးအလိမ့်သာ ခံနေရပါသည်။
ပတ်ဝန်ကျင်မှ လူများမှ မတရားမပြုလုပ်ရန် ဝိုင်းဝန်းအော်ဟစ်နေသော်လည်း ဂရုမစိုက်ကြပါ။ ၎င်းတို့ ရိုက်နှက်လို့ အားရသောအခါ မင်းဘယ်သူ့သွားတိုင်မှာလဲ တိုင်ရဲရင်တိုင်ကြည့် သတ်ပစ်မယ်၊ နောက် ဒီနယ်မြေကို လုံးဝမလာနဲ့ မှတ်ပြီလားဟု စသည်ဖြင့်ကြိမ်းမောင်းပြီး လွှတ်လိုက်ပါသည်။ အိမ်သို့ပြန်ရောက်သောအခါ ကျွန်တော် ၏ ဒဏ်ရာများကိုကြည့်၍ ကျွန်တော်၏ဇနီးမှ မခံမရပ်နိုင်ဖြစ်သည့်အတွက် အမှတ်၅ ရဲစခန်းသို့ သွားရောက်၍ တိုင်ချက်ပေးခဲ့ပါသည်။
၎င်းတို့နှင့် ဆက်လက်၍ ရင်ဆိုင်တွေ့နေရမည်ကိုစိုးသဖြင့် အမှုမဖွင့်ရဲခဲ့ပါ။ ထိုနေ့မှစ၍ ယနေ့ထိတိုင် ကျွန်တော်တို့ မိသားစု မန္တလေးမြို့သို့ ရဲဝံစွာ မသွားလာရဲတော့ပါ။ ငွေအား လူအားများနှင့် မန္တလေးမြို့ကို အပိုင်စီး လွှမ်းမိုးထားသည့်အတွက် ကျွန်တော်တို မိသားစုဘဝ မည်သို့နေထိုင်သွားရမည် မသိတော့ပါ။ ကျွန်တော်တို့၏ မျက်စိရှေ့တွင်လည်း အစိုးရသက်သေလိုက်ခဲ့သူများ ကလေးသူငယ်များအား ကူညီခဲ့သူများအားလုံး ယနေ့ထိ အမှုဆင်၍ ချောက်ချသည့်အတွက် အားလုံး အမှုရင်ဆိုင်နေရသည်ကို ကြားသိမြင်တွေ့နေရသဖြင့် ကျွန်တော်တို့၏ ဘဝမှာ လုံခြုံမှုမရှိပါ။ မိသားစုမှာ သူများနှင့်တန်းတူ စီးပွါးရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စသည့် အခွင့်အရေးများ ဆုံးရှုံးနေရပါသည်။ ကလေးများ၏ ပညာသင်ကြားခွင့်တွင်လည်း အားကိုး မရခဲ့ပါ။ တိုင်ကြားစာများလည်း အရာ မရောက်ခဲ့ပါ။ ကျွန်တော်၏ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးများမှာလည်း သမီးမိန်းကလေးများ ဖြစ်သည့်အတွက် စိုးရိမ် ကြောက်ရွံ့နေမိပါသည်။
နေဝင်းမှာ မိန်မ များစွာ ယူဖူးသူဖြစ်သလို စန်းမောင်မှာလည်း မားသားဝေါဟိုတယ်တွင် မဒိန်းမှုဖြင့် ထောင်ကျဖူးသူ တစ်ဦးဖြစ်သည့်အတွက် သမီးများအတွက် ကျွန်တော့်မှာ စိုးရိမ်းပူပန်ပြီး ယနေ့ထိ စိတ်သောက များနှင့် နေထိုင်ရပါသည်။ ကျွန်တော်သည် မည်သည့်နေရာမှ မသွားရဲသည့်အတွက် မန္တလေးမြို့၊ မန္တလေးခရိုင်၊ အမရပူရမြို့ တစ်မြို့တည်းသာလျှင် သွားလာရဲသည့်အတွက် အိမ်ထဲမှာပင် မိသားစုအိမ်ဆိုင်လေးဖွင့်၍ အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း ပြုလုပ်နေရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့၏ ဖြစ်ရပ်များသည် မြန်မာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးသူငယ်များအပေါ် မတရားညင်းပန်း နှိပ်စက် ခဲ့သည့်အတွက် ဘာသာတရားကို မငဲ့ကွက်ဘဲ လူသားချင်းစာနာ ထောက်ထားသည့် နေဖြင့်၎င်း၊ သားသမီးချင်း ကိုယ်ချင်းစာသည့် အနေဖြင့်၎င်း အမှန်ကို အမှန်အတိုင်း ခံရသည့်ဘက်မှ လိုက်ခဲ့မိသည့်အတွက် ဒုက္ခရောက် ခဲ့ကြရာ ၎င်းတို့မှာ ကုလားအချင်းချင်းဖြစ်သည့်သဏ္ဍာန် ဖန်တီး၍ အများအမြင် ထင်ရောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန် လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ကြပါသည်။ အနှိပ်စက်ခံခဲ့ရသော ကလေးများမှာ မြန်မာဗုဒ္ဓဘာသာ ကလေးများဖြစ်ပြီး ဆိုင်ရှင်မှာ ကုလား၊ အစိုးရဘက်မှ သက်သေလိုက်သူများမှာ ကုလားများဖြစ်နေသည့်အတွက် ၎င်း၏လုပ်ကြံပြောဆိုနေမှုများမှာ ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ ။
BY YeYint Nge ... 1/13/2013 1 comment
r by Wira Thu on Sunday, January 13, 2013 at 1:30pm ·
10.1.2013 ရက်နေ့တွင် စန်းကဖေးပိုင်ရှင် ကိုစန်းမောင် စာရေးသူထံရောက်လာပါသည်။ သံဃာတော်တွေ တိုင်စာနှင့် ပတ်သက်ပြီး လာတောင်းပန်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
နေကဖေးပိုင်ရှင် ကိုနေဝင်းနှင့် စန်းကဖေးပိုင်ရှင် ကိုစန်းမောင်တို့သည် ညီအစ်ကိုရင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ညီအစ်ကို နှစ်ယောက်၏ လုပ်ရပ်သည် မာဖီးယားဂိုဏ်းဆန်နေသောကြောင့် မန္တလေးမာဖီးဂိုဏ်းအမည်ဖြင့် အခန်းဆက် ပို့စ်တင်ထား ခဲ့ရာ ယခုဆိုလျှင် အမှုဟောင်းများတင်စရာကုန်နေပြီး အမှုသစ်များကျန်ပါတော့သည်။
နေကဖေး၊ စန်းကဖေး အမှုကို ဆွေမျိုးရင်းချာချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုကာ မူဆလင်များကပင် မကူညီကြပါ။ နေစန်းညီနောင်ကလည်း ရပ်ကွက်လူကြီး ရဲနှင့် တရားသူကြီးတို့ကို အသေနိုင်ရုံတင်မကပဲ မော်လဝီဆရာကိုတောင် မုတ်ဆိတ်ဆွဲ နာရင်းအုပ်သည်ဟု နာမည်ကြီးခဲ့ရသူများ ဖြစ်ပါသည်။
စာရေးသူက မြန်မာစားပွဲထိုး ကလေးလုပ်သားလေးတွေကို အကြောင်းပြုပြီး ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာဖြစ်သည်က တစ်ကြောင်း မူဆလင်အချင်းချင်းဖြစ်သည် မှန်သော်လည်း နစ်နာသူများသည် အမှန်တကယ် အင်အားနည်းသူများ ဖြစ်သည်ကတစ်ကြောင်း ဤအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့် ပါဝင်ကူညီခြင်းဖြစ်ကြောင်း ပြောခဲ့ပြီး ကတိတောင်းခဲ့ရာ ကိုစမ်းမောင်က လိုလိုလားလား ကတိပေးသွားခဲ့ပါသည်။
စာရေးသူ တောင်းဆိုသော အချက်လေးချက်မှာ
(၁) ထောင်ထဲမှာနေရသော သူများကို ပြန်ထုတ်ပေးဖို့
(၂) ဝရမ်းထုတ်ခံထားရသူတွေ အတွက် ဝရမ်းပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့
(၃) လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရသော အမှုပြန်ရုပ်သိမ်းပေးဖို့
(၄) အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့ ဘဝဖြင့် ထွက်ပြေးနေရသူများ ကိုယ့်အိုး ကိုယ့်အိမ်နှင့် စိတ်ချမ်းသာ ကိုယ်ချမ်သာ ပြန်နေထိုင်နိုင်ဖို့ - ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲ- ဟူသည့် ပြဿနာ ဖြစ်ပါသည်။
ကိုစန်းမောင်က အလွယ်တကူ ဂတိပေးသောကြောင့် ကတိပေးပြီး ပြန်ချိူးဖောက်ပါက လုံးဝညသည်းခံမှာ မဟုတ်ကြောင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရာ ကိုစန်းမောင်က “စိတ်ချ မချိူးဖောက်စေရဘူး”-ဟု ပြောသွားပါသည်။
အမှတ်(၅)ရဲစခန်း၏ လုပ်ရပ်တစ်ဖက်သတ် ဆန်သကဲ့သို့ ဖြစ်နေပေသည်။ ကိုစန်းမောင်တို့ မဟုတ်မတရား လုပ်ကြံစွပ်စွဲသည့် အမှုတုန်းက အလွယ်တကူ အမှုလက်ခံပြီး တရားရုံးတင်ခဲ့ရာ ယ္ခုအချိန်ထိ ဇော်မျိူးအောင်တို့မိသားစု ငွေကုန်လူပန်း ဒုက္ခရောက်နေရပေသည်။
နောက်တစ်ခါ ထပ်မှန်လုပ်ကြံမည်ဆို၍ အမရပူရဆင်ဖြူမယ်ကျောင်းမှ သံဃာများဝန်းရံ ကာကွယ်ပေးနေရ ပေသည်။
နေစန်း ညီနောင်သည် တရားရုံးကို မထေမဲ့မြင်ပြုရုံတင်မကပဲ လုံခြုံရေးအတွက် လာရောက် စောင့်ရှောက်သည့် သံဃာများကိုပါ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းလာ၍ သံဃာများက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ တရားစွဲ တိုင်ကြားသောအခါ အမှတ်(၅) စခန်းသည် အမှုလက်ခံ အရေးယူခြင်း မရှိဘဲ အမှုကြေအေးအောင် လိုက်လံတောင်းပန်ခိုင်းနေသည်ကိုတွေ့ပေသည်။ ဆင်ဖြူမယ် ကျောင်းတိုက်သို့ နေစန်း ညီနောင်သွားရာတွင် စခန်းမှူးကိုယ်တိုင် ပါသည်ဟုသိရပါသည်။
ဇော်မျိူးအောင်တို့ကို လုပ်ကြံတိုင်ကြားစဉ်ကသာ စနစ်တကျ စစ်ဆေးပြီး အမှုလက်မခံပဲ နေခဲ့လျှင် သံဃာတွေ လည်း အလုပ်ပျက်ခံ စောင့်ရှောက်ရမည်မဟုတ်။ စောင့်ရှောက်စရာမလိုလျှင်လည်း အဆဲခံရမည်မဟုတ်။ အခုတော့ အဆဲခံရသူက အမှန်တကယ် အဆဲခံရ၍ တိုင်ကြားသည်ကို အရေးယူခြင်းမရှိ်ဘဲ လိုက်လံတောင်းပန်ခိုင်းနေသည်မှာ အမှတ်(၅)ရဲစခန်းသည် နေစန်းညီနောင် စခန်းဖြစ်နေဖြစ်နေသည်မှာ ငြင်း၍မရနိုင်တော့ပြီ ။
မည်သို့ဆိုစေ မာဖီးယားညီနောင် အလင်ဝင်ကြတော့မည်းဆိုလျှင် ကြိုဆိုရပေမည်။
“ချစ်စကိုရှည်စေ ၊ မုန်းစကိုတိုိစေ
ရန်ကိုရန်ချင်း၊ မတုန့်နှင်းနှင့်-”ဟူသည့်အဆုံးအမများ လူသားတိုင်းလိုက်နာလျှင် ကမ္ဘာကြီးမှာ သွေးထွက်သံယိုပွဲတွေ ရှိလာလိမ့်မည် မဟုတ်ပေ ။
နေစန်းညီနောင်တို့ အမုန်းတရားတွေ အမြန်ငြိမ်းအေးကြပါစေ။
★ Aung San Suu Kyi - The Choice (2012) ★
from BBC This World 2012
Story of Aung San Suu Kyi.
- copyright owned by BBC
ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်းအကြောင်း သိသမျှ...။
၁၉၆၉ ခုနှစ် DSA အပါတ်စဉ် ၁၁ က ဆင်းတဲ့ သူရ ဦးရွှေမန်းဟာ ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီမိုကရေစီ အရေးတော်ပုံကြီးကို စစ်တပ်ကအကြမ်းဖက် နှိမ်နင်းတုန်းက ဗိုလ်မှူး အဆင့်ပဲ ရှိပါသေးတယ်။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာတော့ ကရင်လက်နက်ကိုင်တွေကို တိုက်ရာမှာ အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့လို့ သူရ ဘွဲ့တံဆိပ်ကို ရခဲ့ပြီး ဗိုလ်မှူးကြီး အဆင့်အထိ ရာထူးဆက်တိုက် တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရတယ်။ ၁၉၉၁ မှာ တပ်မ ၆၆ ရဲ့ ဗျူဟာမှူး၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ် မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် အဆင့် တိုးမြှင့်ခံရပြီး ရန်ကုန်လုံခြုံရေးကို တာဝန်ယူတဲ့ တပ်မ ၁၁ ရဲ့ တပ်မမှူး ဖြစ်လာတယ်။ နောက်တနှစ် အကြာ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်မြို့မှာ အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်းမှူးဖြစ်လာပြီး နအဖ စစ်ကောင်စီရဲ့ယာယီအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတယ်။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ် မှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အဖြစ် ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရပြီး စစ်ကောင်စီရဲ့ အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတော့တယ်။
အထက်အမိန့်ကို တသဝေမတိမ်းလိုက်နာပြီး အောင်မြင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ပေးတတ်တဲ့ သူရ ဦးရွှေမန်းကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက မျက်စိကျသလို ဇနီးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ခင်လေးသက် ကလည်း ဒေါ်ကြိုင်ကြိုင်ကို အောက်သက်ကြေအောင် ပြုစုတတ်တော့ အရှင် မွေးတော့ နေ့ချင်းကြီးတော့တာပါပဲ။ ဒေါ်ခင်လေးသက် အောက်သက်ကြေပုံကတော့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မြေးအစဉ်အဆက်ကို ထိန်း ပေး ခဲ့သလို၊ သမီးတွေရဲ့ ဝေယျာဝစ္စတွေနဲ့ အိမ်မှုကိစ္စတွေကို မျက်နှာအောက်ချ လုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့ အတွင်းသိတချို့ကတော့ ပြောကြ တယ်။
တကယ်တော့ ဒီလိုအလုပ်မျိုးတွေဆိုတာ တပ်မှာ ဒေါ်ခင်လေးသက် အဆင့်နဲ့ လုပ်စရာမလိုတဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ဒါပေမယ်လည်း ယောက်ျား တက်လမ်း၊ ဘ၀ တက်လမ်းအတွက် မောင်တထမ်း မယ်တရွက် ဆိုသလို အစွမ်းကုန် စွမ်းဆောင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
နောက်ဆုံးတော့ ဗိုလ်ချုပ် ရွှေမန်းဟာ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာနမှာ တာဝန်ချထားခြင်းခံရပြီး တပ်မတော်သမိုင်းမှာ တခါမှ မရှိဘူး သေးတဲ့ ရာထူးအသစ် တပ်မတော်ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး အဖြစ် ခန့်ထားခြင်း ခံရပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘယ်ရွေ့ဘယ်မျှ ရှိတယ် ဆို တာ တိတိကျကျ မသိရပေမယ့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး နဲ့ ဒု ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး တို့ရဲ့အမိန့်တွေကို အကောင်အထည်ဖော် ကြီးကြပ်ရတယ်လို့ ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန အသိုင်းအ၀ိုင်းက ဆိုကြတယ်။ ဒါပေမယ့် တပ်ထဲမှာတော့ သူ့ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ လူလို့ အားလုံး က သိကြတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေ ကလည်း ဦးရွှေမန်းကို ဘယ်လောက်အထိ ယုံသလဲဆိုတော့ တပ်အပေါ် သြဇာအရှိဆုံး တယောက် ဖြစ် တဲ့ စစ်တပ်ကို ပိုက်ဆံရှာပေးနေရတဲ့ ဦးပိုင်လီမိတက် ဥက္ကဋ္ဌ ဟောင်းလည်းဖြစ် စစ်ထောက်ချုပ်ဟောင်းလည်း ဖြစ်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်အေးနဲ့ တွဲပြီး၂၀၀၈ မှာ စစ်လက်နက်ပစ္စည်း ၀ယ်ယူဖို့ မြောက်ကိုရီးယားကို စေလွှတ်ခြင်းခံခဲ့ရတယ်။
ပြည်တွင်းရေးမှာလည်း ကျယ်ပြန့်တဲ့ အမြင်ရှိပါတယ်၊ အထူးသဖြင့် ဆန်စပါး စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ နိုင်ငံခြားတင်ပို့ရေး ကဏ္ဍတွေမှာ ခေတ် မီ ဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံစီးပွားထက်စာရင် မိသားစု အကျိုးစီးပွားက ပိုများနေမလားပဲ။ တကယ်တမ်း လည်း သူရဦးရွှေမန်း အနောက်တောင်တိုင်းမှူး ဖြစ်စဉ်တုန်းကတည်းက သားကြီး သြရသ အောင်သက်မန်းရဲ့ ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီ ဟာ ဧရာဝတီတိုင်း တတိုင်းလုံးအတွက် မြေသြဇာ ရောင်းချခွင့်လိုင်စင်ကို တဦးတည်းပိုင် အဖြစ်နဲ့ ၀င်ငွေလမ်းဖြောင့်ခဲ့တယ်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှာ လယ်ဧက သုံးသောင်းကျော်ကို ကုမ္ပဏီပိုင် လုပ်ခဲ့လို့ လယ်သမားတချို့ အလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်ခဲ့တယ်။၂၀၀၃ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူး လက်ခံအပြီး ၂ နှစ်အကြာ ၂၀၀၅ မှာ ဧရာရွှေဝါဟာ စင်ကာပူနဲ့ ဘင်္ဂလား ဒေရှ့်ကို ဆန်တင်ပို့ ရောင်းချခွင့် လိုင်စင် ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီကို ဆန် ပြည်ပတင်ပို့ခွင့် ပထမဦးဆုံး ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းပါ။ နာဂစ်အပြီးမှာလည်း ဧရာရွှေဝါကုမဏီနဲ့ လက်ခွဲကုမဏီတွေဟာ ထူး/၀ါဝါ၀င်း/ အစရှိသောကုမဏီတို့နဲ့ အပြိုင် စပါးပေး (စိုက်ပျိုးစရီတ်ချေးငွေ) ကို လယ်သမားများထံ ထုတ်ချေးပြီး နိုင်ငံတော်မှ ချေးသလို စာချုပ်ချုပ် ခေါင်းစဉ်တပ်ကာ ကြွေးမဆပ်နိုင်တဲ့ လယ်များကို တရားရုံးမှတစ်ဆင့် သိမ်းယူသောအလုပ်များ (ခေတ်သစ်ချစ်တီးကဲ့သို့) အများအပြားလုပ်ကိုင်ခဲ့သော ကုမဏီဖြစ်ပါတယ်။
ဧရာရွှေဝါကုမ္ပဏီဟာ ၁၉၉၇ ကတည်းက ဦးတေဇရဲ့ထူး ကုမ္ပဏီနဲ့ ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး အခုအချိန်မှာတော့ စားအုန်း ဆီ၊ ဓာတ်မြေသြဇာနဲ့ လယ်ယာလုပ်ငန်းသုံး စက်ကိရိယာများနဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ တင်သွင်းခြင်း၊ ရွှေတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်း၊ ဆန်၊ ပဲ၊ သစ်၊ ငါး ပုစွန် စတဲ့ ပစ္စည်းတွေကို တင်ပို့ရေးအပြင် လောင်စာဆီတင်သွင်း ရောင်းဝယ်ခြင်းလုပ်ငန်း တွေကို လုပ်ကိုင် နေပါပြီ။ နီးစပ်သူတယောက်ကတော့ “လက်နက်ကလွဲရင် အကုန်လုပ်တယ်”လို့ ပြောပါတယ်။
မိုးကုတ်နဲ့ ဖားကန့်မှာလည်း ကျောက်တူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းတွေ အကြီးအကျယ်လုပ်နေပြီး ရန်ကုန်မှာလည်း မြေကွက်အမြောက် အမြား ပိုင်ထားတယ်။ ဘန်ကောက်၊ မလေးရှား၊ စင်ကာပူနဲ့ သြစတြေးလျမှာ ကွန်ဒိုတွေ ၀ယ်ထားပြီး အမေရိကန်ရဲ့ ဆန်ရှင်ကို ရှောင်ဖို့ မလေးရှားနဲ့ ထိုင်းက ဘဏ်တွေမှာ ငွေစာရင်း ဖွင့်ထားတယ်လို့ အတွင်းသိတွေက ဆိုတယ်။ နေပြည်တော်မြို့တော်တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ဥိးအောင်သောင်းသားအပါအ၀င် တခြားလူကြီးသားသမီးတွေနဲ့အပြိုင် ဆောက်လုပ်ရေးကန်ထရိုက်အမြောက်အများ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တပ်ထဲမှာ ဆက်ရှိနေတဲ့ သူရ ဦးရွှေမန်းရဲ့သားငယ် တိုးနိုင်မန်း ကလည်း စီးပွားရေး အသိုင်းအ၀န်းနဲ့ အဆက်အသွယ် ကောင်းကောင်းရှိတယ်။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေး လုပ်ငန်းနဲ့ ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့ ဇေကမ္ဘာ ဦးခင်ရွှေရဲ့သမီးနဲ့ ထိမ်းမြား ထားတာ မဟုတ်လား။ ကြားရတဲ့ သတင်းတွေအရ နာမည်ကြီး ဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Red Link နဲ့ ဖျော်ဖြေရေး ရေဒီယို ချယ်ရီ FM ဟာ တိုးနိုင်မန်း ပိုင်တယ်လို့ သိရတယ်။
လက်ရှိ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေရဲ့ ပုဂ္ဂလိက ပိုင်ပြုရေး၊ နိုင်ငံ စီးပွား စီမံခန့်ခွဲမှုကို လူတွေက ခနဲ့ကြတယ်။ “အဖေနှင့် သားများ ကုမ္ပဏီ” တွေ ကြီးစိုးတဲ့ ခေတ်တဲ့။ အာဏာရှိတဲ့ အဖေတွေက သားသမီးတွေကို ကုမ္ပဏီထောင်ခိုင်းပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်လိုင်စင်တွေ ဖောဖောသီသီ ချပေးမှတော့ ဒီမိသားစုတွေမှ မကြီးပွားရင် ဘယ်သူ ကြီးပွားတော့မှာတုန်းတဲ့။
လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ကြီး အနေနဲ့ တကယ်လို့များ ပိုင်ဆိုင်မှုစာရင်းကို ကြေညာတဲ့အခါ“ကျနော့် သားတွေ ပိုင်တာ ကျနော်ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး”လို့ အရူးကွက် နင်းမှာကိုတော့ ကြိုသိနေပါကြောင်း။ ။
((( မြန်မာ နိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို ထပ်မံစိမ်ခေါ်ခြင်း...
သင်တန်းသွားသည့် နစကမှူးက နယ်စပ် အ၀င်အထွက်ဂိတ် (၂) ...
ကေအေတီ MRTV4ကိုတရားစွဲမည်
နိုင်ငံပေါင်း ၂၀၀ ကျော်သို့ ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့နိ...
ကုန်ဈေးနှုန်းကျဆင်းရေးမှ ကိုထင်ကျော်ကို လူတစ်စု ဝု...
မြန်မာ-တရုတ် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ စီမံကိန်းအစီရင်...
'ကချင်ကို တိုက်တာဟာ စကားနဲ့ မဖြေရှင်းချင်လို့လား၊ ...
EPHEDRINE 41Boxs ပြင်ပဆေးခန်း များနှင့် ဆေးဆိုင် မ...
စီမံကိန်း အလိုက် ထောက်ပံ့ကြေး ဒေါ်လာ တစ်သောင်း မှ န...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ဆေးကုသမှု ...